Public Health in Myanmar: August 2008
သွေးကင်ဆာ အကြောင်း သိကောင်းစရာ (၁)
Leukemia ဆိုတဲ့ သွေးကင်ဆာအကြောင်း ကို မရေးခင် ကျွန်တော်ဟာ ကင်ဆာ ရောဂါ အထူးကု မဟုတ်သလို သွေးရောဂါ ဆိုင်ရာ ပါရဂူလည်း မဟုတ်ပါဘူး ဆိုတာ ကြိုတင် ပြောကြား လိုပါတယ်။ အရမ်းကျယ်ပြန်တဲ့ ခေါင်းစဉ်ထဲကနေ သိသင့် သိထိုက် တာလေးတွေ ထုတ်နှုတ်ပြီး တင်ပြ လိုပါတယ်။
သွေးကင်ဆာ အကြောင်း မပြောခင် ပုံမှန် သွေးဆဲလ်တွေ အကြောင်း ပြောပြ လိုပါတယ်။ bone marrow လို့ ခေါ်တဲ့ ရိုးတွင်း ချဉ်ဆီ ကနေ ပြီးတော့ သွေးနီဥ၊ သွေးဖြူဥ၊ နဲ့ platelet ဆိုတဲ့ သွေးမွှားဆဲလ် (၃) မျိုးကို ထုတ်လုပ် ပေးပါတယ်။ သူတို့ (၃) မျိုး မှာ ကိုယ်စီ တာဝန်တွေ ရှိပါတယ်။ သွေးနီဥတွေက အောက်ဆီဂျင်ကို သယ်ဆောင် ပေးပြီး သွေးနီဥ နည်းရင်တော့ သွေးအားနည်း ရောဂါ (anemia) ဖြစ်တတ် ပါတယ်။ သွေးဖြူဥရဲ့ တာဝန် ကတော့ ခန္ဓာကိုယ် အတွင်း ၀င်ရောက် လာတဲ့ ရောဂါ ပိုးမွှား တွေကို တိုက်ခိုက် ပေးပါတယ်။ သွေးဖြူဥတွေ ပုံမှန် မဟုတ်ရင်တော့ ရောဂါ ပိုးမွှားတွေကို တိုက်ဖျက် နိုင်စွမ်း၊ ကာကွယ်နိုင်စွမ်း ကျဆင်းပြီး ရောဂါ ဝေဒနာ ထူပြော တတ်ပါတယ်။ platelet (သွေးမွှား) ကတော့ သွေးခဲရာမှာ တာဝန်ယူပြီး သွေးအလွန်အကျွံ မထွက်အောင် ကာကွယ် ပေးပါတယ်။
leukemia ရောဂါမှာတော့ရိုးတွင်းချဉ်ဆီ ကနေ ပုံမှန် မဟုတ်တဲ့ သွေးဖြူဥ တွေ ထုတ်ပေး ပါတယ်။ အစ ပထမတော့ အဲဒီ သွေးဖြူဥ တွေဟာ ပုံမှန် သွေးဖြူဥ တွေနဲ့ မခြား အလုပ် ကောင်းကောင်း လုပ်ကြ ပါသေး တယ်။ အချိန်ကြာလာ တာနဲ့ အမျှ ဖောက်ပြန် လာသလို သွေးနီဥနဲ့ platelet တို့ရဲ့ မူလ တာဝန် တွေကိုပါ ထိခိုက် လာတဲ့ အတွက် ရောဂါ လက္ခဏာတွေ ပြလာ ပါတော့ တယ်။
leukemia ဘယ်နှစ်မျိုးရှိပါသလဲ ?
အဓိက အားဖြင့် ရောဂါလက္ခဏာ မြန်မြန် ပြသလား။နှေးနှေး ပြသလား ဆိုတာကို အခြေခံပြီး -
(၁) chronic leukemia
(၂) acute leukemia
ဆိုပြီး (၂)မျိုး ခွဲခြားနိုင် ပါတယ်။
Chronic leukemia မှာဆိုလျှင် မူမမှန်တဲ့ သွေးဖြူဥ တွေက ပုံမှန် အလုပ်တွေ လုပ်နေကြလို့ အစပိုင်းမှာ ရောဂါ လက္ခဏာတွေ မပြတတ်ပါဘူး။ အချိန် ကြာလာတာနဲ့အမျှ မူမမှန် ဆဲလ် အရေအတွက် များလာပြီ ဆိုမှသာ ရောဂါ လက္ခဏာ ပြတတ် ပါတယ်။
Acute leukemia မှာတော့ မူမမှန် ဆဲလ်တွေဟာ အလျှင်အမြန် တိုးပွား လာရုံမက ပုံမှန် အလုပ် တွေကို လုံးဝ မလုပ်နိုင် တဲ့အတွက် ရောဂါ လက္ခဏာတွေ ချက်ချင်း ပြတတ်ပါတယ်။
သွေးဖြူဥ အမျိုးအစား ပေါ် မူတည်ပြီးလည်း အမျိုးအစား ထပ်ခွဲ နိုင်ပါသေးတယ်။
lymphoid cell မှာ ဖြစ်ရင် lymphocytic leukemia ၊ myeloid cell မှာ ဖြစ်ရင်တော့ myeloid leukemia လို့ ထပ်ခွဲ နိုင်ပါတယ်။
Chronic Lymphocytic leukemia ။ အသက် (၅၅) နှစ် အထက်မှာ ဖြစ်တတ် ပါတယ်။ ကလေးတွေမှာ မဖြစ်သလောက် ပါပဲ။
Chronic Myeloid Leukemia။ အရွယ်ရောက်ပြီး သူတွေမှာ အဓိက ဖြစ်တတ် ပါတယ်။
Acute Lymphocytic Leukemia ကလေးငယ် တွေမှာ အဓိက ဖြစ်ပွား တတ်ပြီး လူရွယ် တွေမှာ လည်း ဖြစ်ပွား တတ်ပါတယ်။
Acute myeloid leukemia ဒီအမျိုးအစား ကတော့ လူကြီး လူငယ် မရွေး ဖြစ်ပွား တတ်ပါတယ်။
ဘယ်လို လူမျိုးတွေမှာ ဖြစ်နိုင်သလဲ ?
ဘာကြောင့် leukemia ဖြစ်ရတယ် ဆိုတာ ဘယ်သူမှ အတိအကျ မသိကြပါဘူး။ သုတေသန စာတမ်းတွေ အရတော့ ဖြစ်နိုင်ခြေ risks များတဲ့ အနေအထား တွေကို သတ်မှတ် နိုင်ခဲ့ ပါတယ်။
ဓါတ်ရောင်ခြည် သင့်မှု ။ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ် အတွင်းက ဂျပန်ကို ကျဲချခဲ့တဲ့ အနုမြူဗုံး ဒဏ်မှ အသင်ရှင် ကျန်ရစ် သူတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ ဆွေစဉ် မျိုးဆက် တွေမှာ leukemia ရောဂါ ဝေဒနာ ပိုမို ဖြစ်ပွားတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဆေး ပညာ မှာလည်း ဓါတ်ရောင်ခြည်ကို သုံးပြီး ကုသ ရတာ ရှိပါတယ်။ ဒါဟာလည်း သာမန် လူတွေထက် စာလျှင် သွေးကင်ဆာ ဖြစ်ဖို့ အလား အလာ ပိုများပါတယ်။
ဓာတုဗေဒ ပစ္စည်းများ ။ အလုပ်ခွင်မှာ ဘင်ဇင်း(Benzene) ၊ ဖော်မယ်ဒီဟိုက် (Formaldehyde) စတဲ့ ဓာတုဗေဒ ပစ္စည်း တွေကို ကိုင်တွယ် ထိတွေ့ နေရ သူတွေဟာ သွေးကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ခြေ များပါတယ်။
ဆေးဝါးများ ။ အချို့သော ကင်ဆာ ရောဂါ ကုသ ဆေးဝါးများကို ကြာရှည် သုံးစွဲလျှင် သွေးကင်ဆာ ဖြစ်ဖို့ အလားအလာ များပါတယ်။
Down syndrome ။ မွေးရာပါ ရောဂါ တစ်ခုဖြစ်ပြီး အဆိုပါ ရောဂါ ဝေဒနာရှင် များဟာ သွေးကင်ဆာ ဖြစ်ပွား နိုင်ခြေ ပိုများ ပါတယ်။
Human T-cell leukemia virus-I ။ အဆိုပါ ဗိုင်းရပ်စ် ပိုးကြောင့် human T-cell leukemia ဆိုတဲ့ ရှားပါး သွေးကင်ဆာ တစ်မျိုး ဖြစ်ပွား တတ်ပါတယ်။ Myelodysplastic syndrome acute myeloid leukemia ဖြစ်နိုင်ခြေ ပိုများ ပါတယ်။
မျိုးရိုးဗီဇ ။ အခြား ကင်ဆာ ရောဂါများ ကဲ့သို့ သွေးကင်ဆာ ဟာလည်း မျိုးရိုး လိုက်တတ်ပါတယ်။
မူမမှန် သွေးဆဲလ် အရေအတွက် အနည်း အများ ပေါ် မူတည်ပြီး ရောဂါ လက္ခဏာတွေ ပြပုံလည်း မတူတတ် ပါဘူး။ အဓိက ရောဂါ လက္ခဏာ တွေကတော့ ...
(၁) နာတာရှည် အဖျားတက်ခြင်း၊ ညဘက် ချွေးထွက်ခြင်း
(၂) ကူးစက်ရောဂါ မကြာခဏ ၀င်တတ်ခြင်း
(၃) ပင်ပန်း နွမ်းနယ်ခြင်း
(၄) ခေါင်းခဏခဏ ကိုက်ခြင်း
(၅) သွေး မတိတ်ခြင်း
(၆) အရိုးနဲ့ အဆစ်များ နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း
(၇) အကျိတ် များထွက်ခြင်း
(၈) ဘေလုံး ကြီးခြင်း
အထက် ဖော်ပြပါ လက္ခဏာ တွေဟာ အခြားရောဂါ မြောက်မြားစွာ မှာလည်း ဖြစ်တတ် ပါတယ်။ မိမိမှာ အဆိုပါ လက္ခဏာ တွေ ခံစား နေရပြီ ဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့ တွေ့ပြီး ရောဂါ ပြသ သင့်ပါတယ်။
Posted by zinthu5comments
Labels: Blood, Cancer, Hematology, Leukemia
(ဒီ topic ကတော့ Green Tea ရဲ.လူသားတွေကိုအကျိုးပြုပုံကို www.myhome16.com (သို.) www.myhome16.blogspot.com မှာ ကျွန်တော် ရေးသား ခဲ့တဲ့ topic ကို ပြန်လည် ကူးယူ ဖော်ပြ ထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။)
ကျွန်တော် အခုရေးမှာ ကတော့ tea (လက်ဖက်ရည်ကြမ်း) ရဲ. အကြောင်းကို ပထမဦးဆုံး ရေးမှာ ဖြစ် ပါတယ်။ Tea ရဲ. လူသားတွေကို ဘယ်လို အကျိုးပြု သလဲ ဆိုတာ ကိုပေါ့။ Tea ကိုတော့ လူတိုင်း ကြိုက်ချင်မှ ကြိုက်လိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့် လူတိုင်း တော့ သောက်ဖူးမှာပါ။ တီး အပါအ၀င် myhome16 က သူငယ်ချင်း တွေရော Tea ကို ကြိုက်ကြရဲ.လား? တစ်ချို.က Tea ရဲ့ ဖန်ခါးခါး အရသာကို မကြိုက် ကြ ဘူးဗျ။ အရသာ ကို အဓိက မထားဘဲ ကျန်းမာရေး ရှုထောင့်က ကြည့်မယ်ဆိုရင် Tea ဟာ အရမ်း အသုံးဝင်တယ် ဆိုတာ တွေ.ရ ပါလိမ့်မယ်။ ဒါတွေကို ဆွေးနွေးကြစို.။
ကမ္ဘာပေါ်မှာ Tea အမျိုးအစား ပေါင်းများစွာ ရှိပါတယ်။ ဥပမာ- Green Tea, Black Tea, Oolong Tea…စသည်ဖြင့်ပေါ့။ ဒီ Tea တွေ ထဲကမှ အခု တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ ခေတ်စားနေတဲ့ Green Tea အကြောင်းကို အလေးပေးပြီး ပြောသွားပါမယ်။ Tea တွေ အကုန်လုံးမှာ Carbohydrate, Protein, Fat တစ်စေ့မှ မပါဘူး။ ဒီတော့ weight လျော့ချင်တဲ့သူတွေ အတွက် အရမ်း ကောင်းတာပေါ့။ ဒီစာဖတ်သူ တွေထဲမှာ fatty ပုတ်တွေ မရှိဘူးလို. မပြောနိုင် ဘူးလေ။ Tea က ကိုယ်ခန္ဓာရဲ. ဇီဝ ဖြစ်စဉ် (metabolic rate) ကို မြန်စေပြီး ပိုလျှံတဲ့ calorie တွေကို လောင်ကျွမ်း စေတဲ့ အတွက် အဆီတွေ စုပြီး ၀ မလာတော့ ဘူး ပေါ့ဗျာ။ ကျွန်တော် ဖတ်ဖူးတဲ့ ဆောင်းပါး တစ်ခုမှာ ဆိုရင် weight လျှော့ချင်ရင် မနက် မိုးလင်း အိပ်ယာထရင် Green Tea ၁ ခွက် ပုံမှန်သောက်ပါ ဆိုပဲ။ သောက်ကြည့် ကြပေါ့။
နောက်ပြီးTea (အထူး သဖြင့်Green Tea) က ဒီနေ. ခေတ်အခါမှာ ကင်ဆာ ရောဂါ ကုတဲ့ နေရာမှာ တောင် အသုံးဝင်နေပြီဆိုပဲ။ တချို. ဆေးသိပ္ပံ ပညာရှင် တွေရဲ. အဆိုအရ Tea ဟာ cancer cell တွေ ပွားတားကို လျော့ကျ စေတဲ့ အပြင် ရှိပြီးသား cancer အကျိတ် (tumour) တွေရဲ. size ကိုလည်း သေးသွား စေပါတယ်တဲ့။ ဒါဟာ တစ်ကယ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ဆေးလိပ် သောက်တဲ့ သူတွေရဲ. အဆုတ် cancer ဖြစ်တဲ့ နှုန်းက U.S. က ဆေးလိပ် သောက်သူတွေ အဆုတ် ကင်ဆာဖြစ်တာရဲ. တစ်ဝက်ပဲ ရှိတယ် ဆိုတာ ပါပဲ။ အဖြေကတော့ ဂျပန်က လူတွေက နေ.တိုင်း လက်ဖက်ရည်ကြမ်း ပုံမှန် သောက်ကြ လို.ပဲ။
သူငယ်ချင်း တို.လည်း Tea ပုံမှန် သောက်ကြ ပေတော့။ အစာအိမ် cancer ကိုလည်း Green Tea က အမှန်တကယ် လျော့ချ ပေးနိုင်ပါတယ်။ ရှိသေးတယ်။ Green Tea ရဲ. အနှစ်(extract) ကိုလိမ်းရင် နေရောင်ခြည်ရဲ. UV ray ကြောင့် ဖြစ်တဲ့ အရေပြား ရောဂါတွေကို ကာကွယ်နိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် အလှကုန် ပစ္စည်း တွေမှာ Green Tea ကိုထည့်ကြ တာလေ။ Tea (Green Tea) ရဲ.မူလ origin က အရှေ.တိုင်း က တရုတ် ၊ ဂျပန် ကစတာ။ အခု Western မှာ Green Tea က တော်တော် နာမည်ကြီးနေပြီ။
Green Tea က ကိုယ်ခံအား (immunity) ကို တက်စေတယ် ဆိုရင် ယုံဖို. ခက်သလို၊ ပြန်ပြောဖို. တော်တော် ခက်လိမ့်မယ်။ ဒါက လောလောဆယ် စမ်းသပ်ဆဲပါ။ ဒါပေမယ့် HIV ပိုးရှိတဲ့ လူနာတွေကို Green Tea တိုက်ပြီး စမ်းကြည့်တော့ HIV ပိုးတွေ ပွားတာကို လျော့နည်း စေလို. အခုဆို တစ်ချို. ဆေးကု ဌာနတွေမှာ Green Tea ကို HIV အကူး စက်ခံ လူနာတွေမှာ combination therapy တစ်ခု အနေနဲ. ထည့်သုံး နေကြပြီ။ လက်ဖက်ရွက်မှာ Fluoride ဓာတ် တော် တော် ပါပါတယ်။ ဒါကြောင့် သွားပိုး စားတာကို ကာကွယ်တယ်။ ပါးစပ်ထဲက bacteria တွေကို သေစေတော့ အနံ.ဆိုးတွေကို မဖြစ်စေပါဘူး။ Listerine တောင် မလိုတော့ဘူး။ အဟီး။
အကြမ်း အားဖြင့် ပြောမယ်ဆိုရင် Green Tea က နှလုံးသွေးကြောကျဉ်း ရောဂါ၊ ဆီးချိုရောဂါ၊ အသည်းရောဂါ၊ အာရုံကြော ပျက်စီးတဲ့ ရောဂါတွေကို အတတ် နိုင်ဆုံး ကာကွယ် ပေးပါလိမ့်မယ်။ မတတ်နိုင် ရင်တော့ ရောဂါဖြစ်မှာပေါ့ဗျာ။ Tea မှာ ထူးခြား တာက အခု ခေတ်စားနေတဲ့ Antioxidant ဆိုတဲ့ ဓာတ်တိုး ဆန်.ကျင် ပစ္စည်း ပါလို.ပဲ။ ဒီပစ္စည်းက ကိုယ်ခန္ဓာက cell တွေ ပုံမှန် ပျက်စီးတာကို ဟန်.တား ပေးတဲ့ ပစည်း။ ဒီ cell တွေ မပျက်စီးတော့၊ အရွယ် မတိုင်ခင် အိုမင်း တာတွေမဖြစ်တော့ ၊ မကောင်း ပေဘူးလား ဗျာ။ ဒါကြောင့် နုပျိုချင်ရင် Green Tea သောက်ကြပါဗျို. ... ။
ဒုက္ခပဲ၊ ဒီ topic ကိုဖတ်ပြီး Green Tea ကြော်ငြာ ထင်သွားဦးမယ်။ ကောင်းတာ တွေချည်းပဲ ရေးနေရတော့၊ တန်ဆေး လွန်ဘေး ဆိုသလို --- မကောင်းတာလေး နည်းနည်းလောက် ရေးလိုက် ဦးမယ်။ Tea ကို အများကြီး (ဥပမာ- Mug ခွက် နဲ. တစ်နေ.ကို အကြိမ် အများကြီး နှစ်နဲ.ချီ) သောက်ရင် ဆီး လမ်းကြောင်းမှာ ကျောက်တည် တတ်ပါတယ်၊ ကျောက်ကပ် ပျက်စီးတတ်ပါတယ်။ အမျာကြီး ပါဝင်နေတဲ့ fluoride ကြောင့် ကျောက်ကပ်နဲ. အရိုးပွ ရောဂါတွေ ဖြစ်နိုင်တယ်။ Tea မှာ caffine ဓာတ်ပါတဲ့ အတွက် ည အိပ်မပျော် တတ်တဲ့ သူတွေ ရှောင်ပါ။ ကျောင်းသား တွေကတော့ စာမေးပွဲနီးလို. ညလုံးပေါက် စာကျက်ချင်ရင် Tea သောက်ပေါ့။ (ဒါပေမယ့်၊ တချို. လည်း Tea သောက်ပေမယ့် အိပ်တာပါပဲ။) ဟုတ်တယ် မဟုတ်လား?။ Tea ရဲ. စိမ်းဝါ၀ါ stain တွေက ရေရှည် သောက်ရင် သွားမှာ စွဲသွားတတ်ပြီး သွားအလှ ပျက်တတ်ပါတယ်။ အများကြီး သောက်ရင် လေထိုး၊ လေနာဖြစ်တတ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ အတွက် ကတော့ Tea နဲ. ရင်းနှီး ပြီးသားပါ။ မသောက်ဖူးတဲ့ သူလည်း ရှိမယ် မထင်ပါဘူး။ ဓလေ့ ထုံးတမ်း အစဉ်အလာအရ လက်ဖက် သုတ် စားရင် ရေနွေးကြမ်း သောက် နေကြပဲ မဟုတ်လား။
U.S. မှာဆိုရင်လည်း Green Tea က အရမ်း ခေတ်စားလာပြီ။ အသင့် သောက် နိုင်တဲ့ ပလပ်စတစ်ဗူးနဲ. ထည့်ထားတဲ့ Green Tea တွေ၊ can နဲ.ထည့်ထားတဲ့ Green Tea တွေကို ဆိုင်တွေတိုင်းမှာ တွေ.နေ ရပြီ။ Starbucks coffee တောင်မှ Green Tea Latte, Green Tea Frappachino… ဆိုပြီး Green Tea ပေါင်ဒါ နည်းနည်း ထည့်ပြီး ထုတ်ထား သေးတယ်။ အဲဒါသာ ကြည့်ပေတော့ Green Tea ရဲ. Popular ဖြစ်ပုံကို။ စံပယ် ပန်းခြောက် လေးတွေ ထည့်ထားတဲ့ jasmine tea ကတော့ မွှေးတဲ့ နေရာမှာ နာမည် ကြီးပါတယ်။ Green Tea ကတော့ jasmine tea လောက် မမွှေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ရရှိမယ့် အကျိုး ကျေးဇူးက jasmine tea ထက်တော့ မလျော့ပါဘူး။ ရှမ်းပြည်နယ်မှာ အဓိက စိုက်တဲ့ ရှမ်း လက်ဖက်ခြောက် ကလည်း ဖန် ခါးခါးလေး နဲ. သောက်လို. ကောင်းလှ ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Tea ရဲ. ကောင်းကျိုး၊ ဆိုးကျိုး တွေ ကို ချင့်ချိန်ပြီး သောက်ကြ မယ် ဆိုရင်Tea ဟာ လူသားတွေကို အလွန် အကျိုးပြု နိုင်တဲ့ ဆေးဘက်ဝင် စားသောက်ကုန် တစ်ခု ဖြစ်ပါ ကြောင်း ... ... ။
Posted by ဒေါက်တာရမ်းကု2comments
ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင် အစားအစာ
ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံရှိ လူမျိုးများ ဟာ အမျိုးသမီးများ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် နှင့် ကလေးမီးဖွား ပြီး နို့တိုက် နေစဉ် ကာလ အတွင်း အစား အသောက် များ ကို အလွန် အမင်း ရှောင်တတ် ကြပါတယ် ... ဗမာ၊ တရုတ်၊ ကုလား၊ ရှမ်း စတဲ့ လူမျိုး များ ရှောင်ကြတဲ့ အစား အသောက် များ ပေါင်းလိုက် ပါက စားစရာတောင် ကျန်မှာ မဟုတ်တော့ပါ ... မိရိုးဖလာ အစဉ် အဆက် က စွဲလာခဲ့သော အယူအဆ မှားများကို ချက်ချင်း ပြင်ဖို့ရာမှာ အတော် ခက်ခဲ ပါတယ် ... ဒါ့ကြောင့် စားသင့်သော အစား အစာ များ၏ ကောင်းကျိုး စားသင့်လျက် မစားပါက ဖြစ်ပေါ် လာမယ့် ဆိုးကျိုးများကို တဖြည်းဖြည်း လက်ခံလာအောင် အထောက် အထား နဲ့တကွ ပြောဆို ပညာပေး ရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ... ကျန်းမာရေး ပညာပေး media အားဖြင့်၎င်း၊ ဒေသအလိုက် ကျန်းမာရေး ဟောပြော ပွဲများတွင် ထည့်သွင်း ပြောကြား၍ ၎င်း၊ သားဖွား ဆရာမများမှ မိခင်များအား တိုက်ရိုက် ပညာပေးခြင်း ဖြင့်၎င်း အဓိက အားဖြင့် အလွှာ တူ အချင်းချင်း (peer to peer) ကိုယ်ဝန်ဆောင် ဖူးသော မိခင်မှ အခြား ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်သို့ ပညာပေး ပြောကြားခြင်း တို့ ဖြစ်ပါတယ် ...
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်မှာ ခံစားရတဲ့ အဓိက ဝေဒနာတွေ ကတော့ ပထမသုံးလမှာ ပျို့အန်ခြင်းနဲ့ လရင့်တဲ့ အခါ ဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ ရင်ပူရင်ကယ်ခြင်း တို့ဖြစ်ပါတယ် ... ပျို့အန်တဲ့အခါ လိုက်နာ ရမှာက တော့ အိပ်ရာ မထခင် အစာကြေ လွယ်တဲ့ ပေါင်မုန့်၊ ဘီစကစ်၊ သီးနှံ တစ်မျိုးမျိုး စားပါ ... ပြီးလျှင် အိပ်ရာမှ ဖြည်းဖြည်း ထပါ ... ရုတ်တရက် ပြင်းထန်သော လှုပ်ရှားမှုကို ရှောင်ပါ ... အစာစားနေစဉ် အစာအိမ် မတင်းစေရန် အရည် ကြားဖြတ် သောက်ပေးပါ ... စပ်တဲ့ အစားအစာ၊ ချွဲပြစ်တဲ့ အစား အစာ များ ရှောင်ပါ ... ဗိုက်တင်းအောင် မစားဘဲ နည်းနည်းနှင့် မကြာမကြာ စားပေးပါ ... ပျို့ချင်လာ ပါက အမြှုပ်ထ အရည်တစ်မျိုးမျိုး(Fizzy drink) သောက်ပေးပါ ... ဂျင်းပါသော အရည်/အစားအစာ ဟာ ပျို့ခြင်းကို သက်သာစေပါတယ် ... လေဝင် လေထွက် ကောင်းသော နေရာမှာ အနားယူပါ..
လရင့်တဲ့အခါ ဖြစ်လေ့ ရှိတာကတော့ ရင်ပူရင်ကယ်ခြင်းပါဘဲ..သန္ဓေသားကြီးထွားလာပြီး မိခင် ဝမ်းဗိုက်အတွင်း နေရာ ပိုယူလာတာ ကြောင့် ဖြစ်ရတာပါ ... အစာကို များများ မစားဘဲ နည်းနည်းနှင့် အကြိမ် များများ စားပါ ... အိပ်ရာဝင် ခါနီး အစာစားခြင်း ကို ရှောင်ပါ ... အစာစားပြီး ခန္ဓာကိုယ် ကွေးခြင်း၊ အလေးအပင် မခြင်း၊ အိပ်ခြင်း ရှောင်ပါ ... လက်ဖက်ရည် ကော်ဖီ များများ သောက်ခြင်း ရှောင်ကြဉ်ပါ ...
ကိုယ်ဝန် ဆောင်စဉ်နဲ့ ကလေး မီးဖွားပြီး နို့တိုက်စဉ် ကာလအတွင်း အစားအသောက် များကို အလွန် အမင်း ရှောင်ကြဉ်ပါက မိခင် အနေနဲ့ လည်း ဗိုက်တာမင်ဓါတ် လိုအပ်ပြီး ကျန်းမာရေး ထိခိုက်နိုင်သလို ကလေးမှာလည်း ဗိုက်တာမင်ချို့တဲ့ပြီး (အရပ်အခေါ်) သူငယ်နာ ရောဂါ လက္ခဏာများ ပေါ်ပေါက်လာ တတ်ပါတယ် ... (ဗိုက်တာမင် ချို့တဲ့ သူငယ်နာ ရောဂါ လက္ခဏာများ ကို သီခြား ရေးသား ပါမယ်)
ဒါ့ကြောင့် ကိုယ်ဝန် ဆောင်စဉ် ကာလနဲ့ မီးဖွားပြီး နို့တိုက်စဉ် ကာလမှာ အာဟာရ ဖြစ်စေသော အစာများကို ရွေးချယ် စားသုံးပြီး ရှောင်ကြဉ် စရာများကို လိုက်နာခြင်း ဖြင့် ကျန်းမာ ဖွံ့ဖြိုးသော ရင်သွေးငယ် များကို အန္တရာယ်ကင်းစွာ မွေးဖွား နိုင်မည် ဖြစ်ပါကြောင်း ရေးသား လိုက်ရပါတယ်..
Labels: Lifestyle, Nutrition အာဟာရ, Reproductive Health မျိုးပွားခြင်းဆိုင်ရာ ဆေးပညာ
Posted by Nu Thwe0comments
စိတ်ငြိမ်ဆေး ဖြစ်တဲ့ ဒိုင်ရာဇီပင် သို့မဟုတ် ဗေလီယမ် (Diazepam a.k.a. Valium) အပါအ၀င် ဘင်ဇိုဒိုင်ရာဇီပင်း မိသားစု (Benzodiazepine family) ဟာ ဆေးစွဲခြင်းနဲ့ နာမည်ကျော်ပါတယ်။ “သုံးတတ်ရင် ဆေး၊ မသုံးတတ်ရင် ဘေး” ဆိုတဲ့ အတိုင်းပါပဲ။ မြန်မာပြည်မှာလို ဆေးတွေကို ကြိုက်သလို ၀ယ်လို့ရတဲ့ နေရာမျိုးမှာ ပိုပြီး သတိနဲ့ အသိရှိသင့်တယ် ထင်လို့ ဒီစာကို ရေးတာပါ။
၁၉၆၀ နှစ်များက စတင်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ ဒိုင်ရာဇီပင် သို့မဟုတ် ဗေလီယမ်ဟာ ၁၉၇၉ ခုနှစ်လောက်မှာ အင်္ဂလန်မှာ သုံးစွဲမှု အထွတ်အထိပ်ကို ရောက်ပါတယ်။ ဒီဆေးအတွက်ရေးတဲ့ ဆေးစာပေါင်း ၃၁ သန်း ရှိခဲ့ပါသတဲ့။ အများစုက အသက်ကြီးတဲ့သူတွေပါ။ ရင်တုန်လို့၊ အိပ်မပျော်လို့၊ ရောဂါပေါင်းစုံနဲ့ နာကျင်ကိုက်ခဲနေလို့ စသဖြင့် အကြောင်းတွေနဲ့ စတာပေါ့။ သုံးကောင်းကောင်းနဲ့ သုံးလာလိုက်တာ နှစ်နှစ် အကြာ ၁၉၈၁ ကျမှ ဒီဆေးဟာ အရမ်း စွဲစေမှန်း သိလာ ကြပါတယ်။
သူက လုံးလုံးလျားလျား မကောင်းတဲ့ဆေးတော့လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ တက်တဲ့အခါ (seizures) နဲ့ မေ့ဆေး မပေးမီ (pre-medication) အတွက် အသုံးဝင်ပါတယ်။ စိတ်ငြိမ်ဆေးအဖြစ်လည်း ခဏ၊ စည်းကမ်းရှိရှိ သုံးမယ်ဆို သုံးလို့ ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နေ့စဉ်ရက်ဆက် မသုံးသင့်ပါဘူး။ အိပ်ဆေးအနေနဲ့ သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ သိပ်သတိထားရပါလိမ့်မယ်။ လနဲ့ ချီသွားရင် စွဲသွားပြီမို့ ဖြတ်ရခက်တတ်ပါတယ်။ ဘာအတွက်ပဲသုံးသုံး လေးပတ်ထက် မပိုသင့်ပါဘူး။ ဖြစ်နိုင်ရင် ရက်ခြားပဲ သုံးသင့်ပါတယ်။
ဆေးစွဲခြင်း (Dependence syndrome) ရဲ့ လက္ခဏာ တွေကတော့ (ယေဘူယျ အားဖြင့် စွဲခြင်း အားလုံး တူပါတယ်)
- ဆေးကို မသောက်ပဲ မနေနိုင်ခြင်း၊ ဆေးကို မရမက ရှာဖွေ သုံးစွဲခြင်း (Craving or compulsion)
- လိုအပ်သောအာနိသင်ရရန် ဆေးပမာဏတိုးသောက်ရခြင်း၊ တစ်နည်းအားဖြင့် ဆေးမတိုးတော့ခြင်း (Tolerance)
- ဆေးမသောက်ရလျှင် ကတုန်ကရင်နှင့် ဆေးသောက်မှ စိတ်ငြိမ် အိပ်ပျော်ခြင်း (Physiological withdrawal)
- ဆေးသည်သာ ဘ၀ကို စိုးမိုးထားပြီး အခြားကိစ္စများကို ပို၍ပို၍ စိတ်မ၀င်စား တော့ခြင်း
- ဆေးသုံးစွဲခြင်းသည် မကောင်းမှန်းသိလျက် မရပ်နိုင်ပဲ ဆက်လက် သုံးမြဲသုံးနေခြင်း
စွဲသွားပြီးမှ ဖြတ်ရတာ အင်မတန် ခက်ခဲပါတယ်။ မဖြတ်ပဲထားတော့လည်း ဆေးအာနိသင်က လျော့လျော့လာတော့ တိုးတိုး သောက်ရင်းနဲ့ နောက်ဆုံး ဆေးလုံးဝမတိုးတဲ့အဆင့် ရောက်တော့ ပြန်ကန်တဲ့ဒါဏ် (rebound) ခံရတာပါပဲ။ ဆေးရဲ့အာနိသင် တစ်ခုက အိပ်မက်မက်စေတဲ့ အိပ်စက်ခြင်းရဲ့အစိတ်အပိုင်းကို ဖိနှိပ်ထားတာမို့ ဆေးအာနိသင် မပြနိုင်တော့တဲ့အခါ အိပ်မက်များ တစ်ခါတရံ အိပ်မက်ဆိုးများ မက်တတ်ပါတယ်။ ဆေးဖြတ်တဲ့အချိန်မှာလည်း ဒီပြဿနာ ရှိပါတယ်။ နေ့ညအချိန်နေရာတွေမှား (Disorientation) ကယောင်ကတန်းတွေမြင် (Visual Hallucination) နဲ့ တော်တော် ခံစားရတတ်ပါတယ်။ စောစော ဖြတ်ရင် ပြဿနာကြော တိုတာပေါ့။
ဆေးဖြတ်တဲ့အချိန်မှာ ဆေးရုံ တက်ကောင်းတက်ရပါမယ်။ ဆေးကိုလည်း မျှင်းဖြတ်ရပါတယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင် လူနာက မခံနိုင်တာနဲ့ ပြန်ခိုးသုံးတာတို့၊ ဆေးရုံက ဆင်းပြေးတာတို့ ဖြစ်တတ်လို့ပါ။ လူနာရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ ခံစားရမှုဝေဒနာပါ။ သူ မလိုက်နိုင်တာကို စာအုပ်ကြီးအတိုင်း ဇွတ်လုပ်လို့လည်း မရပါဘူး။ ဇွတ်လုပ်ရင် အောင်မြင်ဖို့ နည်းပါတယ်။ ဒီကာလ တစ်တောက်လျှောက်လုံး မိသားစုရဲ့ နားလည်မှုနဲ့ ဖေးမမှု အရေးကြီး ပါတယ်။
ဒီလို ပြဿနာပေးနိုင်တဲ့ဆေးကို ဖြစ်နိုင်ရင် မသုံးတာ အကောင်းဆုံးပါ။ ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ်တော့ သာလို့တောင် မစသင့်သေးတယ်။ ပုံမှန်ခဏသုံးစဉ်မှာလည်း မတည့်တဲ့လူတွေမှာ Paradoxical effect လို့ခေါ်တဲ့ ပြောင်းပြန်အာနိသင် ရတတ်ပါတယ်။ စိတ်ငြိမ်ရမယ့် အစား ပိုပြီးဂနာမငြိမ် ဖြစ်တာပေါ့။ ခေါင်းမူးထိုင်းမှိုင်းတာလည်း ဖြစ်တတ်လို့ ကားတို့၊ စက်ပစ္စည်းတို့ မမောင်း၊ မသုံးသင့်ပါဘူး။
မရှင်းတာ၊ သိချင်တာ ရှိရင် မှတ်ချက် ထားခဲ့ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Anderson, I. M., Reid, I. C. (ed.) (2006) Fundamentals of Clinical Psychopharmacology, Oxon: Informa Healthcare
World Health Organisation (1992) The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders, Geneva: WHO
Posted by Nu Thwe2comments
Depressive Disorder လို့ခေါ်တဲ့ စိတ်ဓာတ်ကျရောဂါဟာ အင်မတန် အဖြစ်များပြီး၊ ဆီးချို၊ သွေးတိုးတို့လိုပဲ ဆေးကုရမယ့်၊ ဆေးကုလို့ရတဲ့ ရောဂါတစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ကံနာ၊၀ဋ်နာ ဒါမှမဟုတ် ပျော့ညံ့မှု မဟုတ်ပါဘူး။ ရှက်စရာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။
အနောက်နိုင်ငံစာရင်းများအရဆို လူလေးယောက်မှာ တစ်ယောက်ဟာ ဘ၀တစ်ချိန်ချိန်မှာ စိတ်ဓာတ်ကျရောဂါ ခံစားရနိုင်ပါသတဲ့။ ရုပ်ရှင် သရုပ်ဆောင် Harrison Ford, Marlon Brando, Jim Carrey, Halle Berry နဲ့ ဂီတပညာရှင် Elton John, Billy Joel, Janet Jackson တို့ဟာ သူတို့ စိတ်ဓာတ်ကျရောဂါ ဝေဒနာရှင်မှန်း လူသိရှင်ကြား ကြေညာထားတဲ့ နာမည်ကျော်များထဲက အချို့ ဖြစ်ပါ တယ်။*
စိတ်ဓာတ်ကျရောဂါရဲ့ လက္ခဏာ တွေကတော့
(၁) စိတ်နှလုံး ညှိုးခြုံးခြင်း၊ ငိုချင်နေခြင်း
(၂) အကြောင်းမဲ့ နုံးချိနွမ်းနယ်နေခြင်း
(၃) ခါတိုင်း ပျော်ရွှင်စိတ်ဝင်စားနေကျ ကိစ္စများအပါအ၀င် ဘယ်အရာကိုမျှ မပျော်ရွှင်၊ စိတ်မ၀င်စားတော့ခြင်း
(၄) ခံတွင်းပျက်ခြင်း (တစ်လအတွင်း နဂိုမူလ ကိုယ်အလေးချိန်၏ ငါးရာခိုင်နှုန်း သို့မဟုတ် နှစ်ဆယ်ပုံတစ်ပုံ ကျသွားခြင်း)
(၅) အိပ်မပျော်ခြင်း (ညလယ်နိုးပြီး ပြန်အိပ်မရခြင်း နဲ့ ပုံမှန်ထက် နှစ်နာရီ စောနိုးခြင်းတို့လည်း ပါပါတယ်)
(၆) မျှော်လင့်ချက် ကင်းမဲ့ပြီး၊ ကိုယ့်တန်ဖိုး ပျောက်နေခြင်း
(၇) ထွက်ပေါက် မမြင်တော့ပဲ အနာဂတ်အပေါ် လက်လျှော့ခြင်း
(၈) ကိုယ့်ကိုကိုယ် သတ်သေလိုစိတ် ပေါ်ပေါက်ခြင်း
(၉) အာရုံ စူးစိုက်နိုင်မှု လျော့ပါးသွားခြင်း
(၁၀) မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု နည်းသွားခြင်း
(၁၁) ဘာကိုမှ လုပ်ကိုင်လိုစိတ် မရှိတော့ခြင်း
(၁၂) လိင်မှုကိစ္စ စိတ်မ၀င်စားတော့ခြင်း
ဒါတွေကို တစ်ခါတလေ ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင် မဟုတ်ပဲ မိသားစုက သတိစထားမိတာမျိုးလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အရပ်စကားအခေါ် “စိတ်ဓာတ်ကျ”တာနဲ့ မတူတာကတော့ တကယ်ဆေးကုရမယ့် စိတ်ဓာတ်ကျရောဂါ (Clinical Depression) ဆိုရင် အထက်ပါလက္ခဏာများ (အကုန်လုံးရှိရန် မလိုပါ) နေ့စဉ်ရက်ဆက် အနည်းဆုံး နှစ်ပါတ် ရှိရပါမယ်။ တော်တော့်ကို ခံရဆိုးပါတယ်။ စိတ်ထောင်းတော့ ကိုယ်ကြေဆိုတာ သိပ်မှန်တဲ့ စကားပါ။
သိပ်ဆိုးရင်တော့ အမှန်တကယ်မဖြစ်သော ကိစ္စများကို အမှန်ကဲ့သို့ ယုံကြည်ခြင်းတွေ (delusions) ပါ ရတတ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြစ်မှုကျူးလွန်မိတယ်လို့ ယုံကြည်ပြီး ရဲထံ အဖမ်းခံတာမျိုး၊ ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်က ပုပ်ဟောင်နေတယ်လို့ ယုံကြည်ပြီး လူတွေ့မခံတာမျိုး၊ ကိုယ့်ကို သူများက လုပ်ကြံတယ်ဆိုပြီး အိမ်မှာ အလုံပိတ် ကြောက်နေတာမျိုးပေါ့။ တစ်ခါတလေတော့ ဘယ်သူမှ အနားမရှိပဲ စကားပြောသံတွေ ကြားတာမျိုး၊ အရိပ်တွေ မြင်တာမျိုး လှုံ့ဆော်မှုမဲ့ အကြား/ အမြင်အာရုံတွေ (auditory/ visual hallucinations) လည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ သေသေချာချာ ဆေးကုမှကို ဖြစ်တော့မယ်။
စိတ်ဓာတ်ကျရောဂါမှာ အနုအရင့် (severity) နဲ့ လက္ခဏာပြပုံ မူကွဲ (atypical presentation) လေးတွေ ရှိသေးတယ်။ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေမှာဆိုရင် စိတ်ဓာတ်ကျဝမ်းနည်းတဲ့ ပုံစံထက် ဂနာမငြိမ် ဖြစ်တာနဲ့လာတာ ပိုများတတ်ပါတယ်။ သူတို့အသက်ပိုင်းက စိတ်ဓာတ်ကျတာကို သိပ်ပြီး သတိမထား၊ စကားထဲ ထည့်ပြောလေ့ မရှိတတ်လို့ပါ။ တချို့ကျတော့လည်း မစားနိုင်၊ မအိပ်နိုင်တာနဲ့ ပြောင်းပြန် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ပုံမှန် စားဝင်အိပ်ပျော်တာနဲ့ မတူပါဘူး။ စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ အစားတွေပဲ လှိမ့်စားနေတာ၊ အိပ်ရာထဲမှာပဲ နေပြီး လောကကြီးကို ရင်မဆိုင်ပဲ ရှောင်နေတာမျိုးပါ။
ဆေးကုရမယ်ဆိုတော့ ဒါဟာ လောကဓံပဲ မဟုတ်ဘူးလား။ သူဟာသူ ပျောက်သွားမှာကို ဘာကိစ္စ ပိုက်ဆံကုန်ခံရမှာလဲ လို့ မေးစရာ ရှိပါတယ်။ မှန်ပါတယ်။ လောကဓံ ဆိုတာရော၊ သူဟာသူ ပျောက်သွားမှာ ဆိုတာရော အမှန်ပါပဲ။ ချက်ချင်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဆေးမကု၊ ဆေးမကူရင် ပျမ်းမျှခြင်းအားဖြင့် ကိုးလလောက် ခံစားရတတ်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်အတွင်း ရောဂါကို ပိုဆိုးစေမယ့် နောက်ထပ် လောကဓံ (contributing life circumstances) တွေ မဖြစ်ဘူးလို့ ဘယ်သူက အာမခံနိုင်မှာလဲ။
ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ စိတ်ဓာတ်ကျဝေဒနာရှင်ဟာ သာမန်အချိန်မှာထက်ပိုပြီး စိတ်ထိခိုက်လွယ် (psychologically vulnerable) ဖြစ်နေတတ်တာကို ထည့်စဉ်းစား ရပါမယ်။ အဆိုးအပျက်တွေလည်း ပိုမြင်တတ်ပါတယ်။ ခေါင်းပေါ်မှာ တိမ်တိုက်မဲကြီး (dark cloud) အမြဲတမ်း အုံ့ဆိုင်းနေသလိုပဲလို့ လူနာတွေ မကြာခဏ ပြောလေ့ရှိကြပါတယ်။ ကိုယ့်အသက်ကိုကိုယ် တန်ဖိုးမထားတော့ပဲ အဆုံးစီရင်၊ ထွက်ပေါက်ရှာတဲ့အထိ ဆိုးတတ်လို့ အင်မတန် ဂရုစိုက်သင့်ပါတယ်။
လောကဓံနဲ့ ကြုံတဲ့အခါ လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် တုံ့ပြန်တာချင်း မတူပါဘူး။ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ မျိုးရိုးဗီဇလည်း ပါပါသေးတယ်။ ဒီလို ပြောလို့ မျိုးရိုးလိုက်တယ်လို့လည်း တစ်ထစ်ချ ပြောလို့ မရပါဘူး။ စိတ်ဓာတ်ကျရောဂါ မျိုးရိုးမရှိသူနဲ့ စာရင် စိတ်ဓာတ်ကျရောဂါ မျိုးရိုးရှိသူက လောကဓံအဆိုးစား ကြုံတဲ့အခါ စိတ်ဓာတ်ကျရောဂါ ဖြစ်နိုင်ချေ ပိုများတယ်လို့ပဲ ပြောလို့ရပါတယ်။ နှိုင်းယှဉ်မှုအားဖြင့် (relatively) ပေါ့။
အမှန်တကယ်မဖြစ်သော ကိစ္စများကို အမှန်ကဲ့သို့ယုံကြည်ခြင်း (delusions) နဲ့ လှုံ့ဆော်မှုမဲ့ အကြား/ အမြင်အာရုံ (auditory/ visual hallucinations) တွေပါ ရလို့ကတော့ အရပ်အမြင်မှာ သွက်သွက်ခါ ရူးနေပြီဆိုပြီး ကြောက်ကြ၊ ကျဉ်ကြတတ်ပါတယ်။ ဒါတွေကို အမှန်တရားနဲ့ကင်းကွာခြင်း လက္ခဏာများ (psychotic symptoms) လို့ ခေါ်ပါတယ်။ မသိတဲ့ လူတွေအတွက် အရမ်းခြောက်ခြားစရာ အတွေ့အကြုံပါ။
အမှန်တော့ ဒီလက္ခဏာတွေအားလုံးဟာ ဦးနှောက်ထဲမှာ အာရုံကြောဓာတုပစ္စည်းများ (neuro-chemicals) မျှခြေပျက်ခြင်း (imbalance) ကြောင့် ဖြစ်တာပါ။ ဒါကို စိတ်ဓာတ်ကျ ရောဂါကို တန်ပြန်တဲ့ အနောက်တိုင်း ဆေးဝါးများ (anti-depressants)၊ အမှန်တရားနဲ့ကင်းကွာခြင်းကို တန်ပြန်တဲ့ ဆေးဝါးများ (anti-psychotics) နဲ့ ပြုပြင်ကုသလို့ ရပါတယ်။ လုံးဝ သက်သာ ပျောက်ကင်းနိုင်ပါတယ်။
အထက်ပါ ဆေးတွေဟာ စနစ်တကျ သုံးရင် ထိရောက်ပါတယ်။ စွဲခြင်း (dependence) လည်း မဖြစ်တတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်သဘောနဲ့ ကိုယ် ၀ယ်သောက်၊ ရမ်းကုလို့ကတော့ ဒုက္ခရောက်ဖို့ပါပဲ။ ကြုံလို့ သတိပေးပါရစေ။ စိတ်ဓာတ်ကျရောဂါကို တန်ပြန်တဲ့ ဆေး (anti-depressants) တွေထဲမှာ ဒိုင်ရာဇီပင် မိသားစု (Diazepam/ Benzodiazepines family) လုံးဝ လုံးဝ မပါပါဘူး။ သူက အင်မတန် စွဲစေပါတယ်။ တစ်ဒုက္ခကနေ နှစ်ဒုက္ခ ရှာသလို ဖြစ်တတ် ပါတယ်။ ကိုယ့် အနာဂတ် နဲ့ ဘ၀ကို တန်ဖိုးထားတယ်ဆိုရင် တတ်ကျွမ်းနားလည်သူ စိတ်ရောဂါ ပါရဂူများထံ ချဉ်းကပ်သင့်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခု သတိပေး ချင်တာကတော့ ဘယ်ဆေးမဆို (Paracetamol ပါရာစီတမောက အစ) ဘေးထွက်အာနိသင် (side effects) တွေ ရှိပါတယ်။ မသိကြ၊ မပြောကြလို့ပါ။ ဆေးသောက်တဲ့လူနာမှာ ဒါကို သိခွင့်၊မေးခွင့် ရှိပါတယ်။ ဆရာဝန်ကလည်း သေသေချာချာ ရှင်းပြရမယ့် ၀တ္တရား ရှိပါတယ်။ ဒီအလေ့အထကို မွေးယူရပါမယ်။ ဘယ်ဆေး၊ ဘယ်ရောဂါအတွက် မဆိုပါ။
ဆရာဝန်တွေဟာ ရှိသမျှ တတ်သိတာဝန်ယူနိုင်တဲ့ နတ်ဘုရားတွေ မဟုတ်သလို၊ လူနာတွေဟာလည်း ဘာမှမသိတဲ့ ဘာတာဝန်မှ မယူနိုင်တဲ့ နလပိန်းတုံးတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ ကုသချက် (treatment) ဆိုတာ မျှဝေတာဝန်ယူမှု (shared responsibility) ပါ။ လူနာကို သိသင့်တဲ့ အချက်အားလုံး သူနားလည်မယ့် အရပ်စကားနဲ့ ရှင်းပြပြီး၊ တန်ဖိုးရှိတဲ့ ချင့်ချိန်စဉ်းစားထားတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် (valid informed decision) ချနိုင်အောင် ကူညီရပါမယ်။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ အချုပ်အချာပိုင်မှုကို လေးစားရတဲ့ သမားတို့ ကျင့်ဝတ် (respect for autonomy) ပါ။
စိတ်ရောဂါတွေကို ကုတဲ့နေရာမှာ ဆေးတစ်ခုတည်း အားကိုးလို့တော့ မရပါဘူး။ ရုပ်ပိုင်း၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးပြုပြင်စရာတွေ ရှာဖွေပြုပြင်ရမှာပါ။ မိသားစုရဲ့ နားလည်မှုနဲ့ ပံ့ပိုးမှု လိုအပ်ပါတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ အမြင်ကျယ်မှုနဲ့ လက်ခံမှုကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါဟာ ရောဂါကြောင့် ဖြစ်တာပဲရယ်လို့ သဘောပေါက်ပြီး ဖေးမရပါမယ်။ အပြစ်တင်ရင် ဘယ်သူမှ အကျိုးမရှိပါဘူး။ ဘယ်သူက ဒီလိုဖြစ်ချင်ပါ့မလဲ။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း တစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန် ဒီရောဂါ ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့။
Posted by Nu Thwe 11 comments
Labels: Depression, Mental health, Non-communicable disease
ဒီနေ့တော့ အမျိုးသမီးတွေမှာ အဖြစ်များတဲ့ အရိုးပွ ရောဂါ အကြောင်း သိသင့် သိထိုက် တာ လေးတွေ ပြောပြ လိုပါတယ်။
(၁) အရိုးပွ ရောဂါ ဆိုတာ ဘာလဲ။
သင်ရဲ့ အရိုးတွေ ပွ၊ ပျော့ပျောင်းပြီး ကျိုးပဲ့ ဖို့ အလားအလာ များလာတဲ့ အခြေအနေ တစ်ရပ်ကို အရိုးပွ ရောဂါ လို့ အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်လို့ ရ ပါတယ်။ ရောဂါ လက္ခဏာ မပြပဲ နေတတ်လို့ အရိုးကျိုး သွားတဲ့အချိန် အထိ ကိုယ်မှာ ရောဂါ ရှိမှန်း မသိဘဲ နေတတ် ပါတယ်။ အရိုး ကျိုး သွားရင်တော့ အမျိုးသမီး တစ်ယောက်ရဲ့ နေ့စဉ် လူနေမှု ဘ၀ကို ထိခိုက် နိုင် ပါတယ်။ လမ်းလျှောက်၊ ရေချိုး စတာတွေ က အစ သူများ ပေါ် မှီခို နေရတတ် ပါတယ်။
(၂) ဘယ်အရိုး တွေ ထိခိုက် တတ် ပါ သလဲ။
အဓိက ထိခိုက်တဲ့ အရိုးတွေ ကတော့ ခါးဆစ်ရိုး၊ လက်ကောက်ဝတ် နဲ့ ကျောရိုးမကြီး တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျောရိုးမကြီး ဆိုတာ ခန္ဒာကိုယ် ကို မတ်မတ် ထိုင်နိုင်အောင်၊ ရပ် နိုင်အောင် ထောက်ပံ့ ပေးထားလို့ အလွန် အရေးကြီး ပါတယ်။ အရိုးပွ ရောဂါကြောင့် ထိခိုက် ကျိုးပဲ့ သွားတဲ့ ကျောရိုးမကြီး ရဲ့ ပုံကို မြင်သာအောင် ဖော်ပြ ထားပါတယ်။
ပထမပုံက မတ်မတ်ရပ်နေတဲ့ လူကောင်း တစ်ယောက်ရဲ့ ပုံဖြစ်ပြီး နောက်ပုံ ကတော့ အရိုးပွရောဂါ နဲ့ ကျောရိုးမကြီး ထိခိုက် ထားတဲ့ ပုံ ဖြစ်ပါတယ်။ အရပ်ပု၊ ခါးကိုင်း၊ ဗိုက်သားထွက် လာကာ ခန္ဓာကိုယ် ဖွဲ့စည်း တည်ဆောက်ပုံ ပြောင်းလဲ သွားတာ တွေ့ရ ပါတယ်။
(၃) အောက်ပါ အချက်တွေက သင့်မှာ အရိုးပွ ရောဂါ ခံစားရဖို့ အခွင့်အလမ်း ပိုများ စေပါတယ်။
(ခ) ပိန်ပါး သေးသွယ်ခြင်း(ကိုယ်အလေးချိန် ၁၂၇ပေါင်ထက်နည်းသူများ)
(ဂ) အဖွား၊အမေ၊အဒေါ်၊အမ တို့မှာ ဖြစ်ဖူးခြင်း
(ဃ) မီးယပ် သွေးဆုံးခြင်း၊ (သို့) အသက်ကြီးခြင်း
(င) အမျိုးသားများမှာ တက်စရိုစတီရုန်း (ကျားဟိုမုန်း) ပမာဏ နည်းပါးခြင်း
(စ) အစားအသောက် တွင် ကယ်ဆီယမ် နှင့် ဗိုက်တာမင်ဒီ ပြည့်ဝစွာ မပါခြင်း
(ဆ) ကိုယ်လက် လှုပ်ရှား အားကစား မလုပ်ခြင်း
(ဇ) ဆေးဝါများ ကြာရှည် သုံးစွဲခြင်း
(ဈ) ဆေးလိပ် နှင့် အရက် သောက်သုံးခြင်း
(၄) အရိုးပွ ရောဂါ ရှိမရှိ ဘယ်လို သိနိုင်မလဲ။
အရိုး သိပ်သည်းဆ ကို စမ်းသပ်တဲ့ နည်းပညာ နဲ့ သိရှိနိုင် ပါတယ်။ Dual energy Xray absorptiometry (DEXA) လို့ ခေါ်ပါတယ်။ အသက် ၆၅နှစ် ကျော်ရင်တော့ မိမိအရိုး ရဲ့ သိပ်သည်းဆ ကို စမ်းသပ် သင့်ပါတယ်။
(၅) ဘယ်လို ကာကွယ်နိုင် ပါသလဲ။
အရိုးပွ ရောဂါ မဖြစ်ပွား အောင် ကာကွယ်တဲ့ နည်းလမ်း ကတော့ လွယ်ကူ လှပါတယ်။ အရိုးတွေကို သန်မာအောင် လုပ်ဖို့ပါပဲ။ ငယ်ငယ် ရွယ်ရွယ် ကတည်းက အရိုးတွေ သန်မာအောင် တည်ဆောက်ခဲ့ရင် တော့ အကောင်းဆုံး ပါ။ ဒါပေမယ့် သင် ဘယ်လောက် အသက်ကြီး ပါစေ နောက်မကျ သေးပါဘူး။ သဘာဝ အတိုင်း အရိုး ပျက်စီး ဆုံးရှုံးမှုက အသက် (၃၀) အရွယ်မှာ စ ဖြစ်တတ် ပါတယ်။ ငယ်ငယ် ရွယ်ရွယ် မှာ အစားထိုး နိုင်ပေမယ့် အသက်ကြီး လာတာနဲ့ အမျှ အစား မထိုး နိုင်တော့ပဲ ဆုံးရှုံးမှု က ပိုများ လာပါတယ်။ သွေးဆုံး ပြီးချိန် ဆိုလျှင်တော့ ပိုပြီး အရှိန်မြင့် လာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပွ၊ ပျော့ပြောင်းပြီး ကျိုးပဲ့လွယ်တဲ့ အရိုးတွေ မဖြစ်အောင် ကာကွယ်နိုင် တဲ့ နည်းလမ်း တွေ ရှိပါတယ်။
(က) နေ့စဉ် အစားအစာတွေမှာ ကယ်ဆီယမ် လုံလုံလောက်လောက် ပါဝင် ရပါမယ်။
အရိုးပွ ရောဂါကို ကာကွယ်ဖို့ အထိရောက်ဆုံး နည်းလမ်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကယ်ဆီယမ်ကို အစား အသောက် တွေက ရနိုင် သလို၊ ဆေးပြား အနေနဲ့ လည်း အလွယ်တကူ ၀ယ်ယူ ရရှိ နိုင် ပါတယ်။ အသက် အရွယ် အလိုက် တစ်နေ့တာ ကယ်ဆီယမ် လိုအပ်ချက် က အောက်ပါ အတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး အစား အသောက် အချို့မှာ ကယ်ဆီယမ် ပါဝင်တဲ့ ပမာဏကို နေ့စဉ် လိုအပ်ချက်နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြီး ဖော်ပြပါမယ်။
(ခ) ဗီတာမင်ဒီ လုံလောက်မှု ရှိပါစေ။
ဗီတာမင်ဒီဟာ ခန္ဒာကိုယ်က ကယ်ဆီယမ်ကို ပိုမို စုပ်ယူ နိုင်အောင် ကူညီ ပေးတဲ့ အတွက် သူလည်း အရေးပါ ပါတယ်။ အနောက်နိုင်ငံ တွေ မှာတော့ ဗီတာမင်ဒီ ကို နေရောင်ခြည်က ရနိုင်အောင် နေပူစာ လှုံ ကြ ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာ နိုင်ငံမှာတော့ ထူးပြီး နေပူစာ လှုံဖို့ မလို ပါဘူး။ အစား အသောက်တွေက ရနိုင် သလို ဗီတာမင် ဆေးလုံး တွေ ကိုလည်း မှီဝဲ နိုင်ပါတယ်။ တစ်နေ့တာ ဗီတာမင်ဒီ လိုအပ်ချက် ကတော့ အောက်ပါ အတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဗီတာမင်ဒီ ပါဝင်တဲ့ အစားအစာ အချို့ နဲ့ နေ့စဉ် လိုအပ်ချက် ကို နှိုင်းယှဉ် ဖော်ပြ ထားပါတယ်။
(၆) အာဟာရ မျှတအောင် စားပါ။
ဗိုက်တာမင်အေ၊ ဗိုက်တာမင်စီ၊ မဂ္ဂနီဆီယမ်၊ ဇင့် ဓါတ်များ ပါဝင်တဲ့ အစားအစာ များကို နေ့စဉ် စားသုံးဖို့ လိုပါတယ်။ ပရိုတိန်း ဓါတ် ဟာလည်း အရိုးတွေ သန်မာအောင် တည်ဆောက် ရာမှာ အထောက်အကူ ပြုပါတယ်။
(၇) ကိုယ်လက် လှုပ်ရှား အားကစား။
ကိုယ်လက် လှုပ်ရှား အားကစား လုပ်ခြင်းဖြင့်
(က) Bone loss ကိုနည်းပါးစေခြင်း
ဆေးလိပ်ဟာ အရိုးပျက်စီးမှု ကို မြန်ဆန် စေပါတယ်။ အရိုးပွ ရောဂါ ကို ကာကွယ် ပေးနိုင်တဲ့ အီစထရိုဂျင် ဟိုမုန်း ပမာဏကို လည်း လျော့နည်း စေနိုင် ပါတယ်။ ဆေးလိပ် ဖြတ်ခြင်းဖြင့် ကျန်းမာရေး ကို ဘက်ပေါင်းစုံ ကနေ အထောက်အကူ ပြုပါတယ်။
(၉) အရက် အလွန်အကျွံ မသောက်ပါနှင့်။
အရက်ဟာ ခန္ဒာကိုယ်က စုပ်ယူ ထားတဲ့ ကယ်ဆီယမ် တွေကို အသုံးပြုရာမှာ အခက်အခဲ ဖြစ်စေလို့ အလွန်အကျွံ မသောက်ဖြစ်အောင် ဂရု စိုက်ဖို့ လိုပါတယ်။
အိမ် အပြင်အဆင် ကလည်း အရေးကြီး ပါတယ်။ ရေချိုးခန်း မှာ ရာဘာ အခင်းခင်းခြင်း၊ လက်ကိုင်တန်း ထားခြင်း၊ လမ်းသွား လမ်းလာ ခလုပ်တိုက်မည့် အရာများ အား ရှင်းလင်း ထားခြင်း တို့ဖြင့် ထိခိုက် ဒဏ်ရာ ရပြီး အရိုး ကျိုးမည့် ဘေးမှ ကင်းဝေး စေပါတယ်။
(၁၁) ယောင်္ကျား တွေမှာ ဖြစ်တတ် ပါသလား။
၁၉၉၀ နှစ် မတိုင်ခင် အထိတော့ အမျိုးသမီး တွေမှာပဲ ဖြစ်တတ်တယ် လို့ ထင်ရ ပေမယ့် အခု နောက်ပိုင်း မှာတော့ ယောင်္ကျား တွေမှာပါ ဖြစ်ပွား တတ်ကြောင်း သိလာ ရပါတယ်။ အသက် ၅၀ ကျော် အမျိုးသား ၄ ယောက်မှာ ၁ ယောက်နှုံး ရောဂါ ခံစား ရတာ တွေ့ရ ပါတယ်။
(၁၂) ကိုယ်ဝန်ဆောင် အရိုးပွ ရောဂါ။
ရှာပါး ရောဂါ အမျိုးအစား ဖြစ်ပြီး မီးမဖွားခင် နှင့် မီးဖွားပြီး ကာလမှာ တွေ့ရ တတ်ပါတယ်။ အများ အားဖြင့် ပထမ ကိုယ်ဝန်မှာ ဖြစ်တတ် ပြီး နောက်တစ်ခါ ပြန်ဖြစ်လေ့ မရှိပါဘူး။
(၁၃) ဘယ်လို ကုသ ကြမလဲ။
မှန်ကန်တဲ့ လူနေမှု ပုံစံ၊ အစားသောက်၊ ဆေးဝါးများ ဖြင့် အရိုးပွ ရောဂါကို ကုသ နိုင်ပါတယ်။ မှန်ကန်တဲ့ လူနေမှု ပုံစံ ဆိုတာ ကတော့ ကိုယ်ကာယ လေ့ကျင့်ခန်း မှန်မှန် လုပ်တာကို ဆိုလို ပါတယ်။ ကယ်ဆီယမ် နဲ့ ဗီတာမင်ဒီ ဓါတ် ပြည့်ဝတဲ့ အစား အသောက် တွေကို ဂရုတစိုက် စားသုံး ရပါမယ်။ သက်ဆိုင်ရာ ဆရာဝန်နဲ့ ပြသပြီး ဆေးဝါးများကို ညွန်ကြားချက် အတိုင်း သောက်သုံး သင့်ပါတယ်။
အရိုးပွ ရောဂါဟာ မြန်မာ နိုင်ငံမှာ အဖြစ်များပြီး ဂရုမပြုမိတဲ့ ရောဂါတစ်မျိုး ဖြစ်တာကြောင့် တတ်နိုင်သလောက် အသိပညာ ဖြန့်ဝေ လိုက်ပါတယ်။
Posted by zinthu 1 comments
Labels: Bone, Musculoskeletal system, Osteoporosis
osteoarthritis ဟာ နာတာရှည် ရောဂါ တစ်မျိုး ဖြစ်ပြီး cartilage လို့ခေါ်တဲ့ အရိုနု ဖုံးလေးတွေ ပျက်စီးရာ ကနေ ဖြစ်ပွား တတ်ပါတယ်။ cartilage တွေဟာ အရိုး(၂)ခု ဆုံတဲ့ နေရာမှာ ရှိပြီး အရိုးတွေ တိုက်ရိုက် ပွတ်တိုက်မှု မရှိအောင် ကာကွယ် ပေးပါတယ်။ osteoarthritis ရောဂါသည် တွေဟာ အဆစ်အမြစ် ကိုက်ခဲခြင်း၊ ရောင်ရမ်းခြင်း၊ ကြွက်သားနှင့် အရွတ်များ နာကျင် ကိုက်ခဲခြင်း မှသည် မလှုပ်ရှားနိုင် တော့ဘဲ မသန်စွမ်း ဒုက္ခသည် ဘ၀ကို ရောက်ရှိ နိုင်ပါတယ်။
osteoarthritis ရောဂါဟာ အမျိုးသား နဲ့ အမျိုးသမီးတွေမှာ အချိုး အတူတူ ဖြစ်ပွား တတ်ပြီး အမျိုးသမီး တွေမှာ အသက် ၅၅နှစ် ၀န်းကျင်မှာ ရောဂါ လက္ခဏာ တွေ ပြတတ် ပါတယ်။ အမျိုးသား တွေမှာတော့ (၁၀)နှစ်ခန့် စောပြီး ဝေဒနာ ခံစားရ တတ်ပါတယ်။ ဒူးဆစ်၊ ခါး၊ ကျောရိုးမ နှင့် လက်ဆစ်တွေ ဟာ အဓိက ထိခိုက်တဲ့ အဆစ်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အသက် အရွယ် ကြီးရင်သူတွေမှာ ဖြစ်တတ်လို့ သက်ကြီး ရောဂါလို့ အရင်က မှတ်ယူ ထားကြပါတယ်။ ဒီနေ့ အခါ မှာတော့ အသက်အရွယ် ကြီးရင်မှု သာမက အခြား ရောဂါ ဖြစ်ပွားစေတဲ့ အချက်တွေကို သတိပြုမိ လာကြပါတယ်။ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှု (သို့) အခြား ရောဂါ ဝေဒနာ တစ်ခုခုက osteoarthritis ကို စတင် ဖြစ်ပွားစေပြီး မျိုးရိုးဗီဇ၊ biomechanical forces၊ ဇီဝနှင့် ဓာတုဖြစ်စဉ် တွေက ရောဂါ အခြေအနေကို ဆိုးဝါး စေပါတယ်။ အဆိုပါ ပြုပြင် ပြောင်းလဲ နိုင်တဲ့ အချက်တွေကို ဂရုတစိုက် ပြုပြင် လိုက်မယ် ဆိုရင် ရောဂါ လက္ခဏာ တွေကို တတ်နိုင် သလောက် သက်သာအောင်၊ ပိုဆိုး မလာအောင် ဟန့်တား နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အ၀လွန် သူတွေ ဟာ osteoarthritis ရောဂါ ခံစားရဖို့ အခွင့်အလမ်း ပိုများ ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ် အလေးချိန်ဟာ အဆစ်အမြစ် တွေကို ၀န်ပိ စေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ခန္ဓာကိုယ် အလေးချိန် ထိန်းခြင်းဖြင့် ရောဂါ ဝေဒနာ ခံစားရမှုကို အထိုက် အလျှောက် သက်သာ စေပါတယ်။ ဒူးဆစ် ယောင်ယမ်း သူတွေရဲ့ ၃ပုံ ၂ပုံခန့်ဟာ အမျိုးသမီးတွေ ဖြစ်တာ တွေ့ရပြီး ဒေါက်မြင့် ဖိနပ်စီးတဲ့ သူတွေမှာ ပိုမို အဖြစ်များ တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သတိထား ဆင်ခြင်သင်တဲ့ အချက်ပါပဲ။
osteroarthritis လုံးဝ ပျောက်ကင်းအောင် မကုသနိုင် သေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် နာကျင် ကိုက်ခဲမှု တွေ သက်သာအောင်၊ အဆစ် အမြစ်တွေ ပုံမှန် လှုပ်ရှား နိုင်အောင် လုပ်နိုင်တာတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ အကိုက်အခဲ ပျောက်ဆေးတွေကို ဆရာဝန် ညွန်ကြား တဲ့ အတိုင်း အတိအကျ သုံးစွဲဖို့တော့ လိုပါတယ်။ ဒါ့အပြင် osteoarthritis ရောဂါသည်တွေ နေ့စဉ် လုပ်သင့်တာ တစ်ခု ကတော့ ကိုယ် ကာယ လေ့ကျင့်ခန်းပါပဲ။ လေ့ကျင်ခန်း ပုံမှန်လုပ်ခြင်းဖြင့် ကြွက်သားတွေကို သန်မာ စေရုံသာမက၊ ဟန်ချက်ညီမှုနဲ့ ပျော့ပျောင်းမှု တွေကို အားဖြည့် ပေးပါတယ်။ နာကျင် ကိုက်ခဲမှုကို သက်သာစေရုံ မက အခြား ကျန်းမာရေး ကောင်းကျိုး တွေကိုလည်း ပေးပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ osteoarthritis ရောဂါ ဝေဒနာ သက်သာအောင် လုပ်ဆောင်ရမယ့် ကိုယ်ကာယ လေ့ကျင့်ခန်း လေးတွေကို တင်ပြ လိုပါတယ်။
(၁) Inner leg stretch
ပုံမှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်း ဒူးကိုကွေး၊ ခြေဖ၀ါး(၂)ခု တေ့ပြီး ထိုင်ပါ။ ခြေဖနောင့်ကို ခန္ဒာကိုယ်ဘက် ဆွဲထားပြီး လက်နှစ်ဘက်နဲ့ ခြေ မျက်စေ့ ကို ဆုပ်ကိုင် ထားပါ။ ညို့သကျည်းကို လက်ဖျံနဲ့ ဖိပြီး ခန္ဓာကိုယ် အပေါ်ပိုင်းကို ရှေ့ဘက်ကို ကိုင်းထား ရပါမယ်။အဲဒီလို ၂၀-၃၀ စက္ကန့်လောက် နေရပါမယ်။
(၂) Hip and lower back stretch
ကြမ်းပြင်မှာ ပက်လက် အိပ်ပြီး ခြေထောက် တွေကို ဆန့်ထားပါ။ ခေါင်းကို ကြမ်းပြင်နဲ့ ထိပြီး မေးဆွဲကာ ရင်ဘတ်ကို ကြည့်ပါ။ ဒူးကို ပုံပါအတိုင်း ကွေးပြီး လက်နှစ်ဘက်နဲ့ ပုခုံးဘက်ဆီ ရောက်နိုင်သလောက် ဆွဲပါ။ အသက်ပြင်းပြင်း ရှူထုတ်ရှူသွင်း လုပ်ပါ။ ၂၀-၃၀ စက္ကန့် ခန့် ကြာပါစေ။
(၃) Double hip rotation
ကြမ်းပေါ်မှာ ပက်လက် အနေအထားနဲ့ နေပါ၊ ဒူးတွေကို ကွေးပြီး ခြေဖ၀ါးကို ကြမ်းပြင်နဲ့ ထိထားပါ။ ပုံမှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်း ဦးခေါင်းကို ညာဘက် စောင်းပြီး ခြေ(၂)ချောင်းကို ဘယ်ဘက်သို့ ဖြေးညှင်းစွာ စောင်းပါ။ ၂၀-၃၀ စက္ကန့်ခန့် ကြာပါစေ။ ပြီးလျှင် ဒူးကို အလယ် ပြန်ပို့ပြီး နောက်တစ်ဖက် အတွက်လုပ်ပါ။
ဖော်ပြပါ လေ့ကျင့်ခန်း (၃)ခုကို ပျော့ပျောင်းမှုကို ဦးစားပေးတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းများ လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒီလေ့ကျင်ခန်း တွေကို နာကျင်မှု ဝေဒနာ ခံစားရတဲ့ အချိန်တွေမှာ ပြုလုပ် သင့်ပါတယ်။ ညနေစောင်း အလုပ် တာဝန်တွေ ပြီးဆုံးတဲ့ အချိန်မှာ ပြုလုပ် သင့်ပါတယ်။ တစ်နေ့ကို လေ့ကျင့်ခန်း ၁ -၂ ခုနဲ့ တစ်ပတ်ကို (၃)ကြိမ်ခန့် လုပ်လျှင် လုံလောက် ပါတယ်။
အခု ဆက်လက်ပြီး သန်မာမှု ကို ဦးစားပေး တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း လေးတွေကို ဖော်ပြပါမယ်။
(၁) Chair stand
ကုလားထိုင်ကို နံရံနဲ့ ကပ်ပြီး ထားပါ။ ဒူးကိုကွေး၊ ဖ၀ါးကို ကြမ်းပြင်မှာ ချပြီးထိုင်ပါ။ လက်နှစ်ချောင်း ကို ရင်မှာ ယှက်ပြီး ပုခုံးနှစ်ဘက်ကို ကိုင်ထားကာ နောက်ဘက်ကို မှီပါ။ ခေါင်း၊ လည်းပင်းနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို တည့်တည့် ထားပြီး ရှေ့ဘက်ကို ကိုင်းလိုက်ကာ ဖြေးဖြေးချင်း မတ်တတ် ရပ်ပါ။ ပြီးလျှင် ဖြေးဖြေးချင်း ပြန်ထိုင်ပြီး မူလ အနေအထားကို ပြန်နေပါ။ ၄ခါ မှ ၆ ခါ အထိ ပြန်လုပ်ပါ။
(၂) Hip extension
ကုလားထိုင်ရဲ့ နောက်ဘက် ကနေပြီး ဟန်ချက် ညီအောင် ကိုင်ထားပါ။ ခန္ဓာကိုယ်ကို ရှေ့ဘက်ကို ကိုင်းပြီး ညာဘက် ခြေထောက်ကို တန်းတန်း ဆန့်ပါ။ ပြီးလျှင် အပေါ်ကို မြှောက်နိုင် သလောက် မြှောက်ပါ။ ခဏ ရပ်ထားပြီး အောက်ဘက်ကို ဖြေးဖြေးချင်း ပြန်ချကာ မူလ အနေအထားကို ပြန်နေပါ။ ပြီးလျှင် ဘယ်ဘက်ကို တစ်ပုံစံထည်း လုပ်ပါ။ ၄ ခါမှ ၆ခါ အထိလုပ်လျှင် သင့်တော်ပါသည်။
ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ ဒူးကို ကွေး ဖ၀ါး ကြမ်းထိပြီး ပက်လက် အနေအထား နေပါ။ လက်ဖ၀ါးတွေကို ပုံပါ အတိုင်း ထားပါ။ ကျောကို ဆန့်ဆန့် ထားပြီး ခါးကို မြှောက်နိုင် သလောက်အပေါ်ကို မြှောက်ပါ။ ခဏ နားထားပြီး အောက်ဘက်ကို ဖြည်းဖြည်း ပြန်ချပါ။ ပြီးလျှင် နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်လုပ်ပါ။ ၄ ကြိမ်မှ ၆ ကြိမ် အထိ လုပ်သင့် ပါတယ်။
အဆိုပါ လေ့ကျင့်ခန်း များဟာ ကြွက်သားတွေကို သန်မာစေပြီး အခြား ကျန်းမာရေး ကောင်းကျိုး တွေကိုလည်း ပေးပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပြီး (၁)နာရီ ခန့်မှာ အဆစ်တွေ နာလာရင်တော့ သင်ဟာ လိုအပ်တာထက် ပိုပြီး လုပ်နေပြီ ဆိုတာသတိပြုပါ။
Posted by zinthu0comments
Labels: Bone, Musculoskeletal system, Osteoarthritis
ထို့ကြောင့် ဤအရာ ကိုသံသရာ ဟုခေါ်သည် (၇)
ဆေးဖိုးဝါးခ နှင့် လူနာ
ခေတ်သစ် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂလိက ကုသရေး လုပ်ငန်း များမှာ ကုန်ကျ စရိတ် အားလုံးကို နောက်ဆုံး သုံးစွဲသူ (End User) ဖြစ်တဲ့ လူနာ ကခါးစည်း ကျခံ ရမယ်။ ငွေကုန် ကြေးကျ မခံ နိုင်ရင် ကောင်းမွန် ထိရောက်တဲ့ ဆေးဝါး ကုသ မှုကို မျက်မွှေး ထော်လို့ တောင်မော် မကြည့် လေနဲ့ ဆိုတဲ့ သဘောမျိုး ဖြစ်နေတာ ယနေ့ ကမ္ဘာရဲ့  ရင်နင့် ဖွယ် အမှန် တရား တစ်ခု ပါပဲ။ ငွေမရှိ ရင် ရောဂါ ပျောက်ဖို့ မစဉ်း စားနဲ့ လို့ တရား လက်လွတ် ပြောရာ ရောက်နေ ပါပြီကော။
WHO ရဲ့  ၂၀၀၅ ခုနှစ် မှာထွက်ပေါ် လာတဲ့ technical report အရ- တစ်ကမ္ဘာ လုံးရှိ အိမ်ထောင်စု ပေါင်း ၄၄ သန်း သို့မဟုတ် လူ သန်း ပေါင်း ၁၅၀ လောက်ဟာ ဆေးဖိုး ၀ါးခ စရိတ်ထောင်း တဲ့ဒဏ် ခံနေကြ ရတယ်တဲ့။ အဲဒီ အထဲက ကံပို ဆိုးသူ အိမ်ထောင်စု ပေါင်း ၂၅ သန်း သို့မဟုတ် လူသား သန်း ၁၀၀ ဟာ ဆေးဖိုး ၀ါးခ ကြောင့် ကြွေးတင် ကျွန်ဖြစ် ပြီး ပြာပုံ မတိုး ရပဲ ဆင်းရဲ မွဲတေ ကုန်ကြ တယ်။ ဒီလို ဖြစ်နေ တာတွေ ကို အထူးပြု လေ့လာ တဲ့သုတေ သန လုပ်ငန်း များက ဒီဖြစ်ရပ် ကို “ကျန်းမာရေး စရိတ် (ဆေးဖိုး ၀ါးခ) ကြောင့် ဒုက္ခ ကပ်ဆိုက် ခြင်း (Catastrophic Health Care Payments)” လို့ တင်စား ခေါ်ဝေါ် ခဲ့ကြတယ်။
ရောဂါ ကြောင့် မွဲပြာ ကျခြင်း ဆိုတဲ့ ငိုချင်း ရှည်ကြီး ဟာ ရောဂါ ကုသ စရိတ် ထောင်းလို့ ဆင်းရဲ မွဲတေ ရုံမျှ မက နောက်ဆက် တွဲ ဖြစ်ရပ် တွေ အများကြီး ပါပဲ။ စုဆောင်း ထားသမျှ ပြောင်တဲ့ အပြင်၊ စားဝတ် နေရေး ကျပ်တည်း၊ သား သမီး တွေ ကျောင်းမထား နိုင်၊ ကြွေးတွေ ပါတ်လည် ၀ိုင်း ပြီး ဆင်းရဲ ခြင်းနွံ ထဲက တစ်သက် လုံး မရုန်း ထွက်နိုင်၊ နောက်ဆုံး ရောဂါ ကုဖို့ လက်တွန့် ရှောင်ကျဉ် လာကြ ပြီး ကျန်တဲ့ ပိုက်ဆံ လေး သပိတ်သွပ် ဖို့သာ ထားလိုက် ပါတော့တို့၊ ငါ့သားလေး ကိုသာ ရှင်ပြုပေး လိုက်ပါတို့ ဆေးဝါး ကုသဖို့ နဲ့ ကျန်ကိစ္စ များကို လဲလှယ်လိုက် ရပါ တော့တယ်။ ဒါတင် မကသေးပါ။ ကူးစက် ရောဂါ တွေကို မကု တော့ဖို့ ဆုံးဖြတ် မိရင် ရောဂါ ဖြန့်ဖြူးသူ လက်သည်ကြီး ဖြစ်လာမယ်။ တစ်ယောက် ကစလိုက် တာ ရာ၊ ထောင်၊ သောင်း၊ သိန်း ကူးစက် ပြန့်ပွား ပြီး တိုင်းပြည်ရဲ့  လူမှု၊ စီးပွားရေး အားလုံး ကို ဆုတ်ယုတ် လျော့ပါး သွားအောင် ၀ါးမျို ပစ်လိုက်နိုင်တဲ့ အန္တရာယ် ကြီးဖြစ်နိုင် ပါတယ်။
ဒါဆိုရင် လူနာ အားလုံး ကိုနိုင်ငံတော် အစိုးရ ကတာဝန်ယူပြီး ပြည်သူ့ ဆေးရုံ များမှာ အလကား ကုပေးပါလား လို့ ပြောစရာ ရှိပါတယ်။ တခေတ် တခါ ကအဲသလို လုပ်ခဲ့ ပြီးပါသကော။ Socialized medicine ဆိုပြီး ရှိသမျှ အလကား free health care ဆိုပြီး လုပ်လိုက် တာမွဲပြာ ကျလု နီးနီး ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဘယ်တိုင်းပြည် မှလူ့အဖွဲ့ အစည်း တစ်ရပ် လုံး စိတ်တိုင်းကျ တဲ့ အထိ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ကို အလကားပေး နိုင်စွမ်း မရှိပါဘူး။ သင့်ဘာသာ သင် ဆေးလိပ် တွေ မိုးမွှန်အောင် သောက်လို့ အဆုပ် ကင်ဆာ ဖြစ် လာတာ ကို၊ သင့်ဘာသာ သင် အရက်ကို မိုးမလင်းတမ်း သောက်လို့ အသည်း ခြောက်လာ တာကို နိုင်ငံတော် က အရင်း အနှီး များစွာ ပုံအော သုံးပြီး အလကား ပဲတင်း ကုပေး ရမတဲ့လား။ ဖြစ်နိုင် စရာ မရှိ ပါဘူး လို့ ကျန်းမာရေး ပေါ်လစီ မိတ်ကာ များက အတိ အလင်း ဆိုကြ ပါတယ်။
ဒါဖြင့် ရင် ဒီဖြစ်စဉ် ကြီးကို သူ့ အတိုင်းလွှတ်ပေး ထားမှာလား။ ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်း နည်းတွေ မရှိ တော့ဘူးလား။ ဖြစ်နိုင်ချေ တစ်ခု က တော့ နိုင်ငံတော် မှ တာဝန်ယူ သော မယူ မနေ ရ ပြည်သူ့ ကျန်းမာရေး အာမခံ စံနစ် (Compulsory community health insurance scheme) ကို ကျင့်သုံး နိုင်ပါသတဲ့။ ယူနိုက်တက် ကင်းဒမ်း ရဲ့  အမျိုးသား ကျန်းမာရေး ၀န်ဆောင်မှု စံနစ် (NHS: National Health Service) နဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံ ရဲ့  တက်ရှင် လက်ထက် ကကျင့်သုံး ခဲ့တဲ့ အားလုံး လွှမ်းခြုံ ကျန်းမာရေး စံနစ် (UC: Universal Coverage Scheme) တွေမှာ ဒီသဘောမျိုး ကိုတွေ့ ရပါတယ်။ အမေရိကန် မှာ မှိုလို ပေါက်နေတဲ့ private health insurance တွေကတော့ ဒီ ဖြစ်စဉ် ကြီးကို မပြေလည် စေရုံမျှ မက ပိုလို့တောင် ဆိုးစေ သတဲ့။
သို့သော်လည်း အဲဒီလို compulsory community health insurance scheme တစ်ခု တည်ဆောက် ဖို့ဆို တာကိုက မြင်းမိုရ် တောင် တက်ရ သလောက် ကိုခက်ခဲ ပါတယ်။ အတတ် ပညာ၊ အရင်း အနှီး၊ အချိန်၊ ငွေ၊ လူအင်အား အများကြီး သုံးပြီး တည်ဆောက် ရမဲ့ စံနစ် မျိုးပါ။ ဒီစံနစ် ရဲ့  အဓိက ကျောရိုးဟာ ပြည်သူတွေ ထံက ကောက်ခံတဲ့ ၀င်ငွေခွန် (Income tax) ရယ်၊ ဆေးလိပ်၊ အရက်၊ ဘီယာ လိုကျန်းမာရေး ထိခိုက် စေနိုင်တဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတွေ အပေါ်မှာကောက် ခံတဲ့ Sin tax & earmarked tax တွေရယ် ကိုကျန်းမာရေး အာမခံ ငွေပင် ငွေရင်း လုပ်ပြီး တည်ဆောက်ရ တာကိုး။
အခွန် လို့ဆိုရာမှာ တရားမျှတ သော အခွန် စံနစ် (Progressive tax system) နဲ့ တရား မျှတ မှုမရှိသော အခွန် စံနစ် (Regressive tax system) ဆိုပြီး ရှိနေပြန်တော့ ကိုယ့်တိုင်းပြည် ဟာဘယ်လို အခွန် စနစ်မျိုးနဲ့ စခန်းသွား နေသလဲ ဆိုတာ ကို သုတေသန လုပ်ကြည့် ဖို့ လိုလာပြန် တယ်။ ၀င်ငွေ များသလောက် အခွန် များများ ပေးရ ပြီး ၀င်ငွေ နည်းရင် အခွန် နည်းနည်း ပဲပေး ရတာကို progressive tax၊ ၀င်ငွေ နည်းသူ အခွန်များများ ပေးရပြီး ၀င်ငွေ များတဲ့ သူတွေက နည်းနည်းပဲ ပေးရရင် regressive tax လို့ခေါ်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခု က ဖြစ်လာ လတ္တံ့ သောအန္တရာယ် အပေါ် လူထုရဲ့  သဘောထား ဆန်းစစ်ချက် ဆိုတဲ့ risk analysis ကိုလည်း လုပ်ကြည့် ရသေးတယ်။ ကျန်းမာရေး အာမခံ စနစ် ဆိုတာမျိုးက အကျိုးသက်ရောက် မှုရှိနိုင်သမျှသော လူထုရဲ့  ထည့်ဝင် ငွေ (premium) အားလုံး ကို ငွေပင် ငွေရင်း လုပ်ထားပြီး ဒီအကျိုး ကိုရောဂါ ဖြစ်တဲ့ အခါ ခံစား၊ မဖြစ်ရင် မခံစားနဲ့ ဆိုတဲ့ သဘောမျိုး ရှိတာ ကိုးဗျ။ ဆိုတော့ လစဉ် ကြေး မှန်မှန် ထည့်ပြီး ကိုယ် ကကျန်းမာ ပကတိ၊ ချမ်းသာ အတိ ဖြစ်နေရင် ကိုယ့်ငွေ ကို သူများရောဂါ ကုဖို့ အလှူ လုပ်နေ ရသလို ဖြစ်နေတာပေါ့။ ဒါကြောင့် လည်း risk analysis ဆိုတာ ကိုလုပ် ကို လုပ်ရ ပါတယ်။ ဒီဆန်းစစ်ချက် အရ လောက မှာ လူသုံးမျိုး သုံးစား ရှိသတဲ့ ...
1. ဖြစ်လာ နိုင်တဲ့ အန္တရာယ် (ရောဂါ ရနိုင်ချေ) ကို ရင်မဆိုင် လိုပဲ ကြိုတင် ရှောင်လွှဲ လိုတဲ့ လူမျိုး ကို Risk averters လို့ ခေါ်ပါတယ်။
2. ဘာအန္တရာယ်၊ ဘာရောဂါ ကိုမှ မကြောက်ပဲ လုပ်ချင် တာလုပ်မယ်၊ သေမြေကြီး ရှင်ရွှေထီး ဆိုတဲ့ လူမျိုး တွေကို Risk takers တဲ့။
3. ကြောက်တယ် လဲမဟုတ်၊ မကြောက်ဖူး လည်းမဟုတ်၊ အခြေ အနေပေါ် မူတည် တာပဲ ဆိုသူများ ကို Risk neutrals တွေလို့ ခေါ်ပါတယ်။
Compulsory community health insurance scheme တစ်ခု ကျင့်သုံး တော့မယ့် အခါမှာ ဒီတိုင်းပြည်၊ ဒီ လူမှု အဖွဲ့ အစည်း မှာ ဘယ်လို လူမျိုးတွေ များနေ သလဲ ဆိုတာ ကိုဆန်းစစ် တာကို risk analysis လို့ခေါ်တာပါ။ အကယ်၍ Risk averters က အများစု ဆိုရင် နောင်တချိန် မကျန်းမာမဲ့၊ ရောဂါ ဖြစ်နိုင်တဲ့ အန္တရာယ် ကိုကြိုတင် ရှောင်လွှဲ လိုစိတ် များကြလို့ ဒီစနစ် ကအောင်မြင် နိုင်ပါတယ်။ Risk taker တွေ များရင်တော့ ကိုယ် ရောဂါ ရမှာကို လည်းမပူ၊ သူများ အတွက်တော့ ဝေလာဝေး မို့ ကျန်းမာရေး အတွက် income tax ကသုံးမယ် ဆိုတာကို၊ လစဉ် နှစ်စဉ် premium ကြေး မှန်မှန် ထည့်ရ မှာကို အလွန်ဝန်လေး ကြလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ဒီစနစ် ဘယ်တော့ မှမအောင်မြင် ဘူးတဲ့။ Risk neutral သမားများမယ် ဆိုရင်တော့ လေယူရာတိမ်း၊ ယိမ်းတတ် သူများမို့ အချိန်ပေး၊ နားချ၊ စည်းရုံး မှုအပေါ် မူတည်ပြီး ဖြစ်လာနိုင်ဖွယ် ရှိပါသတဲ့။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီလို စနစ်မျိုး က shock absorber အဖြစ်နဲ့ ရောဂါ ကြောင့် မွဲပြာကျ တာတွေ၊ ငွေမရှိလို့ ဆေးမကု နိုင်တာ တွေ၊ အတွင်းလှိုက် စားရောဂါ ပျံ့ နှံ့ မှုတွေ ကိုခုသာ ခံသာ လုပ်ပေးနိုင် တယ်ပဲ ဆိုဦးတော့ ပြဿနာ အပေါင်း လုံးဝ ကင်းစင် သွားတာ တော့မဟုတ် ပါ။ ကျန်းမာရေး ၀န်ဆောင်မှု ကွာလတီ ညံ့ဖျင်းတာ၊ အကြာကြီး တမေ့ တမော စောင့်ရတာ၊ ဟိုစာရွက် မှာ ဟိုဟာ ဖြည့်ပြီး ဟိုကိုသွား၊ ဒီစာရွက် မှာ ဒီဟာ ဖြည့်ပြီး ဒီကိုလာ စတဲ့ ဗျူုရို ကရေစီ ကြိုးနီ တောင်ကြီး ကို မကျော် လွှားနိုင်တာ။ ဆေးရုံ နဲ့ ဆရာဝန် များ အတွက် provider payment system မှာအားနည်း ချက်တွေ ရှိတာ စသည်ဖြင့် ထိုင်းရဲ့  UC ရော၊ ဗြိတိန် ရဲ့  NHS ရောမှာ အားနည်း ချက် ပေါင်း သောင်းခြောက်ထောင် နဲ့ ပြဿနာ တွေ တလှေ ကြီးပါ။
ဒါကြောင့် စောင့်ဆိုင်း စရာမလိုတဲ့။ ငွေ ရှိရင် အချိန်မရွေး ပြလို့ ရတဲ့၊ ကြိုက်သလောက်သုံး ကျသလောက်ပေး ကျန်းမာရေး ၀န်ဆောင်မှု တွေက ရှိနေဦးမှာ။ လူတွေကလည်း ရောဂါ ရနေဦးမှာ။ ရှင်သူ ရှင်ပြီး သေသူ သေနေကြဦးမှာ၊ ဖြစ်လိုက်၊ တည်လိုက်၊ ပျက်လိုက်၊ဒါကို ပဲ လောကရဲ့  သံသရာ လို့ ခေါ်ကြပြီး မှန်မှန်ကြီး လည်ပါတ် တတ်တဲ့ သဘောလည်း ရှိနေတယ် မဟုတ်လား ။။။။။။။။။။။။။
Labels: Financing, Health care, Health system, Life cycle
အန္တရာယ်နဲ့ ရင်းပြီး သုံးနေကြတဲ့ မိုက်ခရိုဝေ့ဗ် မီးဖို များ
ကမ္ဘာပေါ်ရှိ သန်းပေါင်း များစွာသောလူတွေဟာ သက်တောင့်သက်သာဖြစ်ဖို့ နဲ့အချိန်ကိုချွေတာဖို့မိမိ ကျန်းမာရေး ထိခိုက်နိုင်မှုကို ဥပေက္ခာပြု နေကြပါတယ်။ Microwave oven အတွက် low-density microwave energy ရဲ့ သဘာဝ ကို စတင် ဖော်ထုတ် နိုင်ခဲ့ပုံ လေးကိုလည်း ရှုစားကြည့်ပါဦး။ ၁၉၄၆ မှာ Dr. Percy Spencer ဟာ ရေဒါဆိုင်ရာ သုတေသန တစ်ခုကို လုပ်နေခဲ့တာ ပါ။ သူဟာ Magnetron လို့ ခေါ်တဲ့ vacuum tube လေးကို စမ်းသပ်နေစဉ်မှာ သူ့ အိတ်ကပ်ထဲက candy ချောင်းလေး အရည် ပျော်သွားတာကို စတင် သတိထားမိပါတယ်။ အဆိုပါ tube အနားကို ပေါက်ပေါက် ပြောင်းတွေ ထားကြည့်တော့ ပေါက်ထွက်ပြန့် ကျဲကုန်တာကို တွေ့ လိုက်ရတယ်။ ဒါနဲ့tube အနားကို ကြက်ဥ တစ်လုံး ထားကြည့်လိုက်တယ်။ ကြက်ဥဟာလည်း တစ်ဖြည်းဖြည်း ပူလာပြီး ပေါက်ထွက် သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့အခြားသော အစားအစာများကို အလွယ်တကူ ချက်ပြုတ်နိုင်အောင် Microwave oven တွေကို စတင် တီထွင်ခဲ့တာပါ။
ဒီ electromagnetic waves တွေဟာ ဦးနှောက်မှာရှိတဲ့ ပီကျူထရီဂလင်း၊ မျက်လုံး၊ ဝှေးစေ့၊ သွေးဆဲလ်တွေကို အဓိက အန္တရာယ် ပေးပါတယ်။ Oven တွေမှာ အဆိုပါ waves တွေမထွက်အောင် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ ထုတ်လုပ် ထားတယ်လို့ တော့ ဆိုပါတယ်။ သို့ သော်လည်း ကျန်းမာရေးကို ခြိမ်းခြောက်မှုတွေက လျော့နည်းမသွားပါဘူး။ ဂျာမနီ Humbolt Universitat zu Berlin က ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သုသေတနနဲ့ရုရှား ရေဒီယို တက်ခ်နော်လော်ဂျီ တက္ကသိုလ်များ ပူးပေါင်း ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ သုတေသန တွေက မက်ခရိုဝေ့ဖ် သုံး အစားအစာ များရဲ့ကင်ဆာ ရောဂါဖြစ်စေနိုင်မှု၊ အစားအစာ အရည်အသွေး လျော့ကျစေမှု (အာဟာရ ဓါတ်များ ဆုံးရှုံးမှု)၊ မိုက်ခရိုဝေ့ဖ် စွမ်းအင် စိမ့်ထွက်မှု ဆိုးကျိုး များနဲ့ ပက်သက်ပြီး သက်သေ အချက်အလက် များစွာ တင်ပြ နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါ သုတေသနများ အရ ပေါ်ပေါက်လာတဲ့မိုက်ခရိုဝေ့ဖ် သုံးစွဲမှုကို စွန့် လွှတ်သင့်သော အကြောင်းအရာ တွေကတော့ ...
- မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်ကို ကာလရှည်ကြာ စွဲစွဲမြဲမြဲ သုံးစွဲသူတွေမှာ ဦးနှောက်တွင်း လျှပ်စီးမှု ထိခိုက် ပျက်ယွင်း ခြင်း
- မိုက်ခရိုဝေ့ဖ် သုံး အစားအစာများတွင် ပေါ်ပေါက်လာသော အမျိုး အမည်မသိ ဘေးထွက် ပစ္စည်း များကို ကိုယ်ခန္ဓာမှ မချေဖျက် နိုင်ခြင်း
- မချေဖျက် နိုင်သော ဘေးထွက် ပစ္စည်းများ၏ မကောင်းသော အာနိသင်များ ကိုယ်ခန္ဓာတွင် ကျန်ရှိ နေခြင်း
- အဆိုပါ အစားအစာများကို ရေရှည် စားသုံးမှုကြောင့် ကျား/မ ဟော်မုန်းများ ထုတ်လုပ်မှု ပြောင်းလဲ နိုင်ခြင်း
- ဗီတာမင်၊ သတ္တုဓါတ်၊ အာဟာရဓါတ်များ လျော့နည်း သွားခြင်း
- အသီးအရွက် များတွင် ပါရှိသော သတ္တုဓါတ်များမှ ကင်ဆာ ဖြစ်စေသော free radicals များ အဖြစ် ပြောင်းလဲ သွားခြင်း
- အစာအိမ်နှင့် အူလမ်းကြောင်း ကင်ဆာများ ဖြစ်စေခြင်း (အမေရိကမှာ အူမကြီး ကင်ဆာ ဖြစ်ပွားမှု တိုးလာစေတဲ့ အကြောင်း အရာတွေ ထဲက တစ်ခုလို့ဆိုကြ ပါတယ်)
- ကင်ဆာဆဲလ်များ သွေးထဲ ရောက်ရှိမှုကို ပိုမို များပြား စေခြင်း
- ပြန်ရည်ကျိတ် နှင့် သွေးအတွင်း ပြောင်းလဲမှုများ ကြောင့် ကိုယ်ခန္ဓာ ခုခံအား စနစ် ချို့တဲ့ အားနည်း ခြင်း
- မှတ်ဉာဏ်နဲ့ အာရုံစူးစိုက်မှုများကို လျော့ကျစေခြင်း
ဒါ့အပြင် မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်နဲ့ ပက်သက်လို့အလုပ်ရှုပ်လှပါတယ်ဆိုတဲ့ နို့ ဘူးတိုက်မေမေများ အထူးသတိထားစရာ တစ်ချက်ရှိပါသေးတယ်။ အချိန်မရှိလို့ ဆိုပြီး ကလေးနို့ ဘူးကို မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်ထဲ သွား မထည့်လိုက် ပါနဲ့ ။ နို့ဘူး မှာ အေးပုံ ပေါက်နေ သော်လည်း အတွင်းရှိ နို့များ ပူ နေလို့ကလေးရဲ့ ပါးစပ်နဲ့ လည်ချောင်း အပူလောင် သွားတတ် ပါတယ်။ နို့ မှာ ပါဝင်တဲ့ အချို့ အမိုင်နို အက်စစ် (အသားဓါတ်) တွေဟာ အသွင် ပြောင်း သွားပြီး ကလေးရဲ့အာရုံကြောနဲ့ကျောက်ကပ် တွေကို ထိခိုက် စေနိုင်ပါသေးတယ်။
၁၉၉၁ က အမေရိကန်၊ အော့ကလာ ဟိုးမား ဆေးရုံ တစ်ခုမှာ မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်နဲ့ အပူပေးထားတဲ့ သွေးကို သွင်းပေးလိုက်လို့သာမန် သွေးသွင်းမှု လေးမှ လူနာတစ်ဦး အသက် ဆုံးရှုံး ခဲ့ဖူး ပါတယ်။ မိုက်ခရို ဝေ့ဖ် ကြောင့် သွေး အတွင်း ပစ္စည်းများကို ပြောင်းလဲ စေခဲ့ ပုံပါပဲ။
၂၁ ရာစု လူသားများကတော့ ထိုသို့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး များလှသော မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်များကို မက်မက်မောမော သုံးစွဲနေကြပါတယ်။ အချိန်ကုန်လည်း သက်သာပါတယ်။ လူလည်း သက်သာလှပါတယ်။ အရသာလည်း ထူးကဲလှပါတယ်။ ပူပူ နွေးနွေး လေးတွေ လည်း စားရ ပါတယ်။
- အချိန်ကုန် သက်သာ သော်လည်း မိမိလူ့ သက်တမ်းကို ထိခိုက် စေကြောင်း …
- လူသက်သာသော်လည်း မမြင်နိုင်သော ထိခိုက်မှုများ ကိုယ်ခန္ဓာတွင်း ဖြစ်ပွား နေကြောင်း …
- အရသာထူးလှသော်လည်း အာဟာရ ဓါတ်များ ချို့ တဲ့နေကြောင်း …
- ပူပူ နွေးနွေးလေးရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ ကင်ဆာ ဖြစ်စေသည့် ဓါတ်ပစ္စည်း ပါဝင် နေနိုင်ကြောင်း ကိုတော့ဖြင့် … … … …
Posted by wynn.sun2comments
ထို့ကြောင့် ဤအရာကို သံသရာ ဟုခေါ်သည် (၆)
ကျန်းမာရေး အသုံး စရိတ် နှင့် ဆေးဖိုးဝါးခ
ဈေးကွက် ထဲမှာ အောင်ပန်းပန် လို့ အောင်လံ တံခွန် လွှင့်ထူ ထားတဲ့ ပုဂ္ဂလိက ကုသ ရေး ဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေး စောင့် ရှောက်မှု လုပ်ငန်း ဟာ အမေ ရိကန် တစ်နိုင်ငံ လုံးကို လွန်ခဲ့ တဲ့ အနှစ် လေးဆယ် လောက်က စလို့ ၀ါးမျို ပစ်လိုက် တယ်။ ဘာသာရေး အသင်း အဖွဲ့ အချို့ ရဲ့  ခနော် ခနဲ့ မဖြစ် စလောက် အခမဲ့ ဆေးရုံ ကလေး များနဲ့ အစိုးရ ရဲ့  Medicare & Medicaid program ခေါ် သက်ကြား အိုနဲ့ ဒုက္ခိတ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု မဖြစ်စလောက် ကလွဲ လို့ ပေါ့။ ကျွန်တော် တို့ ရွှေပြည်ကြီး မှာလည်း ယခင် စာဘူးတောင်း သာသာ ပုဂ္ဂလိက ဆေးခန်း လေးများ ရန်ကုန် ရွှေဘုံ သာလမ်း လောက်မှာ ပဲ ကျိုးတို့ ကျဲတဲ ရှိခဲ့ ရာက ဈေးကွက် လှိုင်းလုံး ကြီးတွေ ရိုက်ခတ်တဲ့ ၁၉၉၀ ပြည်လွန် နှစ်များ ကစလို့ ပုဂ္ဂလိက ဆေးရုံ ဆေးခန်း များဟာ ကလလ ရည်ကြည် သန္ဓေ တည်လာ လိုက်တာ အချိန် တိုတို အတွင်း အခြေ ခိုင် အသားကျ လာကြတယ်။ ဘယ်စီးပွား ရေးလုပ်ငန်း မှ မယှဉ် နိုင်လောက် အောင် ဖွံ့ဖြိုး လာတယ်။ ခန္ဓာ ရှိသရွေ့  ဝေဒနာ ရှိမှာ မို့ ဖောက်သည် မရှိမှာ ဘယ်တော့ မှပူ စရာ မလိုတဲ့ လုပ်ငန်းကိုး။
၀န်ဆောင်မှု သဘောလည်းပါ၊ ဈေးကွက် စံနစ် လည်းဖြစ်လို့ လက်ဝါးကြီး အုပ် (Monopolize) လုပ်လို့ မရပဲ အပြိုင် အဆိုင် တွေများ လာတယ်။ ဒီလို ဆိုတော့ ကိုယ့်ဆေးခန်း လူများများဝင်ဖို့ ဆွဲဆောင် တဲ့ နည်းလမ်း တွေ သုံးလာ ကြရ ပြီပေါ့။ လူနာ တွေကို ကံစမ်းမဲ နဲ့၊ မော်ဒယ် ရှိုးပွဲ နဲ့ ဆွဲဆောင်လို့ မရဘူး။ လူနာ နှစ်ယောက် ကျုပ်တို့ ဆေးရုံ တက်ရင် နောက်ထပ် တစ်ယောက် အလကား တက်ခွင့် ပေးမယ် တူးပလပ်စ်ဝမ်း ပါလို့ ပရိုမိုးရှင်း လုပ်လို့ မရတာ လဲသေချာ တယ်။ ဒီမှာ တင်ပဲ အရည် အသွေးမြင့် ကုသရေး လုပ်ငန်း (Quality Health Care) ဆိုတဲ့ စကားလုံး ကိုနှုတ်တက် ရွရွ ရွတ်ဆို ကြတော့တယ်။ ကုသမှု အရည် အသွေး မြင့်လေ၊ ဝေဒနာ ပျောက်ကင်း ချမ်းသာ ဖို့အာမခံ ချက်ပေးနိုင် လေ၊ လူနာများများ ရဖို့ သေချာလေ၊ ဆိုတော့ ဒိတ်ဒိတ်ကြဲ အတွေ့အကြုံ ရင့် ဆရာဝန် ဂေါ်ဇီလာ ကြီးများ၊ နောက်ဆုံးပေါ် ရောဂါ ရှာဖွေရေး စက်ကရိယာ များ၊ ပြည်သူ့ ဆေးရုံများ မှာ အိပ်မက်တောင် မမက်ဝံ့ တဲ့ ဒစ်ဂျစ်တယ် ကုသရေး အသုံး အဆောင်များ၊ လှိုက်လှဲ ပျူဌာ ယဉ်ကျေး ပြီးမြင်ရုံ နဲ့ ရင်တုန် သွားရမဲ့ ဧည့်ကြို မယ်ကလေးများ၊ အပျံစား လူနာ နားနေ ခန်းများ၊ မျက်စိပဿာဒ ရှိဖို့ ဘာညာ၊ အကွန့် အညွန့် တွေကို အပြိုင် အဆိုင် ထင်တိုင်းကြဲ ကြတော့တယ်။ ဟိုတယ် ဆေးရုံ ၀န်ဆောင်မှု (Hotel Hospital Service) ဆိုတဲ့ စကားလုံး တောင်သုံးလာ ကြတယ်။ ဒါကြောင့် နောင် အမြတ် အစွန်း ကိုမျှော်ကိုးပြီး ထည့်လိုက် ရတဲ့ အရင်း အနှီး ကကြောက် စရာကောင်း လောက်အောင် ကြီးလာတယ်။ ဆေးရုံ ကြော်ငြာ လေးတစ်ခု ဖတ်ကြည့် ကြပါစို့ --- --- --- --- -- --- --- --- ။
“ကျွန်ုပ် တို့၏ ဆေးရုံကြီး သည် နိုင်ငံ တကာ အဆင့်မှီ ဆေးကုသ မှုကို ပေးစွမ်း နိုင်ယုံ မျှမက ဆေးရုံတွင်း ကြွရောက် လာသူ သဗ္မူရိသ အနွယ်ဝင် သူတော်စင် မိတ်သဟာ အပေါင်းအား ချစ်စဖွယ် ကောင်းလှပြီး ချိူသာ ယဉ်ကျေး လွန်းလှ သည့် ဧည့်ကြိုမယ် ကလေးများက အပြုံးပန်း များဖြင့် ပထမ ဆုံးကြိုဆို ပါရစေ။ မိတ်ဆွေ ဆောင်ရွက် စရာ ကိစ္စရပ် အားလုံး ကိုဝန်ဆောင်မှု ၀န်ထမ်းများက သေချာ စေ့စပ်စွာ လုပ်ဆောင်ပေးပါမည်။ ရေမြှုပ် ဆိုဖာ တွင်ထိုင်ရင်း ဧည့် ခန်း ဆောင် အတွင်း မှစိမ်းလန်း စိုပြေသော ရောင်စုံ ပန်းမာန် များ နှင့် ရေပန်း များကို ကြည့်ရှု ခံစားရင်း မိတ်ဆွေ စိတ်ချမ်း သာစွာ နေထိုင်ပါလေ။ မိတ်ဆွေ ခံစားနေရ သောဝေဒနာ ကိုပိန်းကြာ ဖက်တွင် ရေမတင် သလို လျှောကျ ပျောက်ကင်း အောင် ကုသ ပေးနိုင် စွမ်းရှိ သည့် ၀ါရင့်၊ သမ္ဘာရင့် ဒိတ်ဒိတ်ကြဲ၊ လက်လက်ထ၊ ဆရာဝန် ကြီး နှင့်ဆွေးနွေးပါ။ ဆေးရုံ တွင် တက်ရောက် ကုသရန် လိုအပ် ပါက ကြယ်ငါးပွင့် အဆင့် ဟိုတယ် ၀န်ဆောင်မှု ထက် သာလျှင်သာမည်၊ မညံ့သော ကျွန်ုပ် တို့၏ လူနာခန်း များကို မိတ်ဆွေ စိတ်တိုင်းကျရ ပါစေမည့်။ ကေဘယ် တီဗွီ မှ ၂၄ နာရီ ဖျော်ဖြေရေး အစီအစဉ် များကို ကြည့်ရင်း အပန်းဖြေပါ။ ဂေါက်ရိုက်ချင် သေးသည် ဆိုလျှင် အနီးနားမှာ ကိုးကျင်း မီနီဂေါက်ကွင်း ကလေးနှင့် --- --- --- --- -- --- --- ---”
ပျော်စရာကြီး။ ရောဂါ သာမရှိခဲ့ ရင်ပေါ့လေ။ ဆေးရုံ လာပါတယ် ဆိုမှ ရောဂါ မရှိတဲ့ လူရှိမလား ဗျ၊ ကွာလတီ ၀န်ဆောင် မှု ဆိုတဲ့ သဘောကို ထင်သာအောင် ပြောပြ တာပါ။ ဒီလို ကွာလတီ့ ကွာလတီ ၀န်ဆောင်မှု တွေ အတွက် ရင်းနှီး မြုပ် နှံ လိုက်ရတဲ့ ကုန်ကျ စရိတ် တွေဟာ သူ့ထက်ငါ အပြိုင် အဆိုင် ခေတ်ကြီး မှာ ကျေသွားတယ် လို့ မရှိလောက်အောင် ထပ်ထပ် ပြီးတက်တက် လာလို့ စက်လှေကား အရင်း အနှီး (Cost Escalation) လို့ အမည် ကင်ပွန်း တောင် တပ်ပေး ထားရသေး။
ဒီကုန်ကျ စရိတ် တွေကို ဒီဝန်ဆောင်မှု ကိုနောက်ဆုံး သုံးစွဲ သူ (End User) လည်းဖြစ်၊ ငါ့ဝမ်း ပူဆာ မနေသာ သူလည်း ဖြစ်တဲ့ လူနာ များက ကျခံ ရမှာ ကတော့ အသေ အချာ ပဲပေါ့။ ဒါကြောင့် လည်း ဒီအတွက် သင်အိတ် ဖောင်း နေဖို့ တော့ လိုသည် လို့ ထည့်ကြော်ငြာ စရာ မလိုလောက်အောင် သဘောပေါက် နားလည်ပြီးသား။
ကြိုက်သလောက် သုံး၊ ကျသလောက် ပေး ဆိုတော့ လူနာများများ ၀င်ဖို့ ဆွဲဆောင်ဖို့ လိုလို မလိုလို လုပ်ထားတဲ့ အပို ၀န်ဆောင်မှု စရိတ် စက တွေ အားလုံး ကိုအချိုးကျ ပေါင်းထည့်လိုက် တဲ့အခါ အမှန် တကယ် ကျသင့် ကျထိုက် တဲ့ ဆေးဖိုး ၀ါးခ ဆိုတာ ထက် အများကြီး ပိုကျ သွားပါတော့တယ်။ ဧည့်ကြို မယ်ကလေး တွေရဲ့  အပြုံး တစ်စ အတွက်၊ ဧည့်ခန်း ထဲက ရေမြှုပ် ဆိုဖာမှာ ထိုင်ပြီး ရေပန်း ကိုမျက်စိ ပဿာဒ ခံစား မိတဲ့ အတွက်၊ အခန်း ထဲကနေ ထမင်း ပွဲ ရှေ့ ရောက် မှာစား မိတဲ့ အတွက်၊ ရေချိုး ဇလုံ ကြီး ထဲ ရေမွှေး ဆပ်ပြာ တွေ ထည့်ပြီး ဇိမ်ခံ ရေချိုးမိတဲ့ အတွက်၊ နာလန် ထစ မှာငြိမ်ငြိမ် မနေနိုင် ပဲ ဒရိုက်ဗာ တုတ်နဲ့ ဟန်လုပ်ပြီး ဂေါက်သီး ကိုအုပ်မိ တဲ့ အတွက်၊ ဟိုဟာ အတွက်၊ ဒီဟာ အတွက်၊ အားလုံး အတွက် ပေးဖို့ တာဝန် မိတ်ဆွေ မှာရှိနေ သည်မဟုတ် ပါလား။
Useful links to epidemiological software and courses (1)
Free Epidata software
Free public health software
Interactive Statistical Pages Project
Public domain EpiInfo software
The Epidemiology Supercourse
University of Alabama Masters in Public Health – Biostatistics Course
The Network of Training Programs in Epidemiology and Public Health Interventions
Posted by Dr. Win Khaing (Public Health)0comments
Labels: Education, Epidemiology, Self learning
ထို့ကြောင့် ဤအရာကို သံသရာ ဟုခေါ်သည် (၅)
ကျန်းမာရေး စံနစ် နှင့် ကျန်းမာရေး အသုံး စရိတ်
WHO ရဲ့  Health System Performance Index အရ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု အကောင်းဆုံး ကနေ အဆိုးဆုံး တိုင်းပြည် ထိ အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံတွေ ကိုအမှတ်စဉ် ချလိုက်တဲ့ အခါ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ဆရာဝန်၊ သမားတော် ကြီးများ စုစည်းရာ လို့လက်မ ထောင်နေတဲ့ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ဟာ နံပါတ်ဝမ်း တစ်၊ ဂဏန်း တစ်ပဲ လို့ ထင်တစ်လုံး နဲ့နေ ကြရာ က တကယ်တမ်း မှာတော့ အဆင့် (၃၉) မှာသာ ရပ်တည် ရရှာ တယ်။ ကျန်းမာရေး စံနစ် ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် အကောင်းဆုံး အဆင့် (၁) ကပြင်သစ် နိုင်ငံ၊ အဆင့် (၂) ကအီတလီ နိုင်ငံ၊ UK က အဆင့် (၁၈)၊ အာရှစီးပွားရေး ဘုရင် ဂျပန် ကတော့ အဆင့် (၁၀) ပါ။ ၀မ်းနည်း စရာ ကောင်း တာက ကျွန်တော် တို့ရဲ့  မြန်မာ နိုင်ငံ ဟာ ဒီဇယား မှာ အဆင့် (၁၉၀) ချိတ်ပါတယ်။ သူ့ နောက်မှာ ဘာကီယာ ဖူဆို တစ်နိုင်ငံသာ ကျန်ပါတော့တယ်။
(အထင်သေး လွန်ပြီး ရမ်းထည့် တဲ့ Data တွေရယ်၊ တိတိ ကျကျ ဘယ်လိုမှ မရ နိုင်လို့ မှန်းထည့် တဲ့ data တွေကြောင့် ဒီလောက် ဖြစ်ရ တာပါ၊ အမှန်တော့ Financial contribution component တစ်ခု ကလွဲ ရင် ဒီလောက် အခြေ အနေ မဆိုးပါ။)
ဒီလို လည်းအဖြေ ထွက်ရော အရာရာ ငါသာ ပထမ လုပ်ချင်ကြ တဲ့ အန်ကယ်ဆမ် တို့ မစ္စတာ ယန်းကီး တို့လူစု ဆွေ့ဆွေ့ခုန် အောင် မခံ မရပ် နိုင်ဖြစ် ကြပါတယ်။ ပြင်သစ်နဲ့ အင်္ဂလန် မှာ ဆရာဝန် တစ်ဦးရဲ့  တစ်နှစ် ပျမ်းမျှ ၀င်ငွေ ဟာ ဒေါ်လာ ခြောက်သောင်း သာရှိနေ ချိန်မှာ USA ကဆရာဝန် တစ်ဦး ဟာ တစ်နှစ် ပျမ်းမျှ ၀င်ငွေ ဒေါ်လာ နှစ်သိန်း ကျော် ရှိပါတယ်။ ကျန်းမာရေး အသုံး စရိတ် ကိုကြည့်ဦး မလား။ ပြင်သစ်နဲ့ အီတလီ ကကျန်းမာရေး အတွက် နိုင်ငံ့ GDP (Gross Domestic Product) ရဲ့  (၉) ရာခိုင်နှုန်း၊ UK က (၈) ရာခိုင်နှုန်း နီးပါး လောက်ပဲ သုံးနေချိန်မှာ USA က ကျန်းမာ ရေး အတွက် GDP ရဲ့  ၁၄ ရာခိုင်နှုန်း လောက်သုံးပြီး ဇောတိက ဇီဝက ဂိုက်ဖမ်း နေပါ တယ်။ ဒါနဲ့ တောင် ဒီလောက် အဆင့် ဖြစ်စရာ လားဆိုပြီး ဒေါမနဿ ပွားကြ တယ်လေ။ စူပါ မက မက်ဂါ အင်အားကြီး များဆိုတော့ WHO အညွှန်း ကိန်းဟာ မှန်ပုံ မရ ဘူးလို့ ယူဆပြီး သူသြဇာ ညောင်းတဲ့ OECD ခေါ် စီးပွားရေး အကျိူးတူ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် ရေး အဖွဲ့ ကို Health system performance index အသစ် တီထွင် ခိုင်းပြီး တစ်စင် ထောင် ပါလေ ရော။ OECD index အရ လည်း သူ့ရဲ့  ကျန်းမာရေး စံနစ် အဆင့် သတ်မှတ်ချက် ဟာဒုံရင်း ဒုံရင်း ပါပဲ။ အလုပ်ပို ပြီး တစ်ရှက် ကနေ နှစ်ရှက် ဖြစ်ခဲ့ ရတာသာ အဖတ် တင်ခဲ့တယ်။
ကမ္ဘာ့ ထိပ်သီး ပါဝါ နိုင်ငံကြီး။ ကျန်းမာရေး စရိတ် တွေဒီလောက် သောက်သောက် လဲသုံးစွဲ ပြီး ကျန်းမာရေး စံနစ် က ဘာကြောင့် ထိပ်သီး မဖြစ် ရတာတုန်း ဆိုတာ စိတ်ဝင် စားစရာ ပါပဲ။ US Health System Analysts များရဲ့  သုံးသပ် ချက် အနန္တ ထဲက အဓိက အကြောင်း ကတော့ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ကိုအစိုးရ ကတာဝန် လုံးဝ မယူပဲ ပုဂ္ဂလိက လက်ထဲ ၀ကွက်အပ် ပြီး privatization လုပ်ထား လို့ ဒီလို အဖြစ်ဆိုး ရတာပါတဲ့ ခင်ဗျ။
ခေတ်သစ် ဘောဂ ဗေဒ ရဲ့  ဂေါ့ဖားသား ကြီး အဒမ် စမစ် က “အစိုးရ ကအုပ်ချုပ် ရေးပိုင်း ကိုသာ တာဝန်ယူပါလေ။ စီးပွားရေး လုပ်ငန်း မှန်သမျှ လုပ်ငန်းရှင် တွေစိတ်ကြိုက် လုပ်ပါစေ။ ဈေးကွက် ချိန်ခွင်လျှာ ကိုမမြင်ရတဲ့လက် (Invisible Hands) တွေက သူ့ အလိုလို ထိန်းညှိ ပေးသွားလိမ့် မယ်” ဆိုတဲ့ စကားကို ဈေးကွက် စီးပွားရေး မာစတာ အန်ကယ်ဆမ် တို့က အင်မတန် နှစ်သက် သကိုး။ ဒါနဲ့ပဲ Health Care ကိုဈေးကွက် စီးပွားရေး ပုံစံ လုပ်လို့ ဖြစ်ဖြစ် မဖြစ်ဖြစ် ဈေးကွက် ထဲ ဇွတ်ထည့် ပစ်လိုက် ကြတော့ တာပေါ့။ ဒီမှာ မေးစရာ ရှိလာတာက ---
ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက် မှုဟာ ဈေးကွက်ဝင် ကုန်ပစ္စည်းလား?
အခြေခံ ဘောဂဗေဒ သီအိုရီ မှာ လူတွေရဲ့  ၀ယ်လိုအား (Demand)၊ ဈေးနှုန်း (Price) နဲ့ ၀င်ငွေ (Income) ပေါ်မူတည် ပြီး ဈေးကွက်ဝင် ကုန်ပစ္စည်း အမျိုး အစားကို လေးမျိုး လေးစား ခွဲကြ ပါတယ်။
၁၊ ပစ္စည်းဈေးနှုန်း (Price) ကြီးနေပြီး စားသုံးသူရဲ့  ၀င်ငွေ (Income) က နည်းနေ ရင် အဲဒီ ပစ္စည်းကို ၀ယ်လိုအား နည်းမယ်။ ပစ္စည်းဈေးနှုန်း ကျလာပြီး၊ ၀င်ငွေ ကောင်းနေ ရင်တော့ ပစ္စည်း အပေါ်ဝယ်လိုအား ကောင်းလာ မယ် ဆိုရင် အဲသလို ကုန်ပစ္စည်း အမျိုး အစားကို ပုံမှန်ကုန်ပစ္စည်း (Normal Goods) လို့ ခေါ်ပါတဲ့။ လူသုံးကုန် ပစ္စည်း အများစု ဟာ ဒီ Category ထဲမှာ။
၂၊ ပစ္စည်း ဈေးနှုန်း တက်သည်ဖြစ်စေ၊ ကျသည် ဖြစ်စေ၊ ၀ယ်သူ ရဲ့ ဝင်ငွေ အခြေ အနေ ဘယ်လို ရှိရှိ၊ ပစ္စည်း တစ်ခု အပေါ် ၀ယ်လိုအား ကမပြောင်းလဲ ပဲ ဘယ်ခေတ် ရောက်ရောက် ပန်းပန် လျှက်ပါ ဆိုတဲ့ ပစ္စည်း မျိုးကို မရှိ မဖြစ် ကုန် ပစ္စည်း (Essential goods) တဲ့၊ အခြေခံ စားသောက်ကုန် ပစ္စည်း များပေါ့။
၃၊ ပစ္စည်း ဈေးနှုန်း ကအရမ်း ချိုသာ တယ်၊ သုံးစွဲ သူများ ကလည်း မူးစု ပဲစု ဆိုတဲ့ အချိန်မှာ ဒီပစ္စည်း မျိုး အလွန် ရောင်း ကောင်းတတ် တယ်။ လူတွေ ရဲ့  ဘ၀ တွေ အဆင်ပြေ၊ လူနေ မှုတွေ အဆင့်မြင့် ၊၀င်ငွေ တွေတိုး လာတာ နဲ့ အမျှ ၀ယ် လိုအား ကဖုတ်ကနဲ ပြုတ်ကျ တတ်တဲ့ ပစ္စည်းမျိုး ကို မရှိသုံး ကုန်ပစ္စည်း (Inferior goods) တဲ့ဗျား။ အသင့်စား ခေါက်ဆွဲ ထုတ်တို့၊3in 1 instant coffee mix တို့ဆိုတာ ဒီလို အမျိုး အစား တဲ့ဗျား။ သိန်းငါးရာ ထီပေါက် ရင် ခေါက်ဆွဲ ခြောက် ကွန်တိန်နာ နဲ့ တစ်လုံး ၀ယ်စား မယ်လို့ စိတ်ကူး ယဉ်တဲ့ လူမျိုး တွေ့ဖူး လို့လား။ ဒါကြောင့် ဒီပစ္စည်း မျိုး ထုတ်လုပ် ရောင်းချ သူများ ဟာလူတွေ အမြဲတမ်း ဆင်းရဲ၊ စုတ်ပြတ် ပြီး အမွဲ တကာ့ ထွဋ်ခေါင် ဘ၀ ကမတက် ပါစေနဲ့ လို့ ဆုတောင်း ရမလို ပါပဲ။
၄၊ ၀ယ်သူ တွေက ၀င်ငွေ အလွန် ကောင်းချိန် မှာ ၀ယ်လိုအား အတန် အသင့် ရှိမယ်၊ ပစ္စည်း ဈေးနှုန်း ကတော့ ထိလု မိုးဆီ တိမ်သို့မှီ။ ၀င်ငွေ နည်းနည်း လျှော့သွား တာနဲ့ လုံးဝ ကိုမရောင်း ရတော့တဲ့ ပစ္စည်း မျိုးတွေ ကိုဇိမ်ခံ ကုန်ပစ္စည်း (Luxury goods) ပါတဲ့။ ကျောက်မျက် ရတနာ၊ ဇိမ်ခံကား များ စသည်ဖြင့်ပေါ့၊ ဒီပစ္စည်း ရောင်းသူ တွေကတော့ လူတွေ အားလုံး ဇောတိက ဘ၀ ကတစ်ပြား မှမလျော့ ပါစေနဲ့ လို့ နေ့စဉ် ဘုရား မှာ အခါတစ်ရာ ဆုတောင်းမယ် ထင်ပါတယ်။ ကုသိုလ် ရတာ ပေါ့ဗျ။
ပြောချင် တာက အကယ်၍ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ဟာရောင်းလို့၊ ၀ယ်လို့ ရတဲ့ ကုန်ပစ္စည်း တစ်ခုဆိုရင် အထက်ပါ လေးမျိုး ထဲက ဘယ်အမျိုး အစားထဲ ပါဝင် ပါသလဲ? စဉ်းစား တော်မူ ကြည့်ကြ ပါလေ။ သေချာ စဉ်းစား ရင် ဘယ်အမျိုး အစား ထဲမှ အတိ အကျ ထည့်လို့ မရပါ။ ဒါကြောင့် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက် မှုကို ကုန်ပစ္စည်း လို့ သဘော ထားခဲ့ရင် တောင် ဒါဟာ လူထု နဲ့ဆိုင်သော ကုန်ပစ္စည်း (Merit good, public good) သာဖြစ်တယ် လို့ ပြောတဲ့ သူကပြော၊ ကျန်း မာရေး စောင့်ရှောက် မှုဟာ လူတစ်ဦး ချင်းစီ အတွက် ဆိုရင် မရှိ မဖြစ် ကုန်ပစ္စည်း ဖြစ်ပြီး တိုင်းပြည် တစ်ခု လုံး အတွက် ဆိုရင် တော့ဇိမ်ခံ ကုန်ပစ္စည်း ပဲလို့ စွပ်စွဲ တဲ့လူတွေ လည်းဒုနဲ့ဒေး။
ငွေကုန် ကြေးကျ ခံနိုင် တိုင်းတော့ ကျန်းမာရေး စံနစ် တစ်ခု ကောင်းမလာ တာကိုရွှေ အမေရိကန် ကအကောင်းဆုံး သင်ခန်း စာပြသွား ခဲ့ပါပြီ။ သို့သော် လည်းငွေကြေး ကိုလုံးဝ ထည့်သွင်း မစဉ်းစားပဲ စေတနာ၊ ၀ါသနာ၊ အနစ်နာ သာ အရင်း တည်ပြီး ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု လုပ်ငန်းကြီး တစ်ခုလုံး ကိုလည်ပါတ် လို့ရနိုင် ရိုးလား။ ဥဒ္ဒစ္စ၊ ကုက္ကုစ၊ ဒေါ မနဿ တွေတိုး လာပါ လိမ့်မယ်။ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု လုပ်ငန်း ဟာ ဥုံ-ဟတ်ချလောင်း၊ ရောဂါ ပျောက်စေ လို့ မန်းမှုတ် ပြီး ရှိသမျှ ရောဂါ ပျောက်စေ မယ်ဆို ရင်တောင် ဂါထာ မန်းမှုတ်သူ စတဲ့ အရင်း အနှီး လိုသေး တာကိုး။ ဆေးရုံ များ၊ ကျန်းမာရေး ဌာနများ၊ ရောဂါ ရှာဖွေရေး ပစ္စည်းများ၊ ပညာရှင် များ၊ လုပ်သား များ စတဲ့ စတဲ့ စွမ်းအားစု များအတွက် ငွေကြေး စိုက်ထုတ်မှု အရင်း အနှီး သိပ်ရှိတာပေါ့။ ကျန်းမာရေး စံနစ် တစ်ခု အတွက် မနဲ လှတဲ့ ငွေကြေး အရင်း အနှီး တွေကို မျှမျှ တတ ဖြစ်အောင် စီမံ ခန့်ခွဲ နိုင်ဖို့ အလွန် လိုအပ် ပါတယ်။
တကယ်တော့ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု လုပ်ငန်း ဆိုတာ ရောဂါသည် လူနာ နဲ့ ကုသသူ သမား တို့ရဲ့ ဆေးကုသ မှု လုပ်ငန်း တစ်ခုတည်း ဘယ်ဟုတ် မလဲ။ ပြီးပြည့် စုံသော ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု (Comprehensive Health Care) မှာ လုပ်ငန်း လေးရပ် ပါဝင် တယ် ---
ကျန်းမာ နေသော ပြည်သူ များအား ပို၍ ကျန်းမာ စေရန် လုပ်ပေး သော promotive health service
ရောဂါ ဖြစ်လတ္တံ့သော လူထု ကို ရောဂါ မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးသော preventive health service
ဝေဒနာသည် လူနာ များကို ရောဂါ ပျောက်ကင်း အောင် ကုသ ပေးသော curative health service
ရောဂါ၏ နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုး များကြောင့် ကိုယ်ကျိုးနည်း ရသူ များကို ပြန်လည် ထူထောင် ၍ ပုံမှန် လူ့အဖွဲ့ အစည်းတွင်း ပို့ဆောင် ပေးသော rehabilitative health service
ရယ်လို့ လုပ်ငန်း ကြီး လေးရပ် လုံး လုပ်ပေး နိုင်ပါမှာ ပြီးပြည့်စုံ တဲ့ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု လို့ဆိုသကိုး။
ဒါပေမဲ့ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု လို့ပြောရင် အရင်ဆုံး မျက်စိထဲ ပြေးမြင် တာက ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်း များပဲ မဟုတ် လား။ ဆေးပညာ သမိုင်းတစ်လျှောက် လုံးလည်း ကုသရေး လုပ်ငန်း ကသာ အဓိက ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု အဖြစ် ပါဝင် ကပြ အသုံးတော် ခံခဲ့ တာနှစ်ပရိစေတ္တ ကြာကြာ လှပေါ့။ ဒါကြောင့် လည်းတကမ္ဘာလုံး ရဲ့ ကျန်းမာရေး ဘတ်ဂျက် ခွဲတမ်း ဟာ အမြဲတမ်း ၈၀-၂၀ ပေါ်လစီ ပဲ။ ဆိုလိုတာ ကတော့ ကျန်းမာရေး ဘတ်ဂျက် ရဲ့  ၈၀ % ကို ကုသရေး လုပ် ငန်း မှာသုံးစွဲ ပြီး ကျန်သုံးခု ကတော့ ၂၀% ကိုမျှသုံး ကြရတယ်။ USA မှာကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု လုပ်ငန်း အားလုံး ကို ပုဂ္ဂလိက ပိုင်ပြုလိုက်တယ် လို့ အထက်က တင်ပြခဲ့တယ်။
တကယ်တော့ ကုသရေး လုပ်ငန်း ကိုသာ ပုဂ္ဂလိက ပိုင်ပြု လို့ရပါတယ်။ ကျန် လုပ်ငန်း သုံးခု ကိုဘယ်ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းရှင် ကမှ အစိုးရ ထံမှ လက်လွှဲ မယူဝံ့ပါလေ။ ထည့်သွင်း ရင်းနှီး လိုက်တဲ့ အရင်း မှန်သမျှ ကျောက်ခဲ ရေမြုပ်သလို စွပ်ကနဲ မြုပ်ပြီး ဘာအကျိုး အမြတ် မှမရတဲ့ ဒီလုပ်ငန်း တွေ အတွက် ပီတိ စားပြီး အားရှိ မဲ့ဘိဇနက် သမား တစ်ယောက် မှမရှိ၊ မြတ်ချင် လို့ ရင်းနှီး မှုပြုတာကိုးဗျ။ ဘိဇနက် လုပ်ငန်း ရှင် တွေရဲ့ အမြင်မှာ promotive, preventive & rehabilitative ဆိုတဲ့ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု လုပ်ငန်း သုံးရပ် ဟာ သွေးစုပ် ဖုတ်ကောင် ကြီးသုံးကောင် လိုအန္တရာယ် ကြီးလွန်းလှတယ်။
ပါတ်ဝန်းကျင် သန့်ရှင်းရေး လုပ်ငန်းများ၊ ကျန်းမာရေး ပညာပေးခြင်း၊ အဖြစ်များ ရောဂါ များထိန်းချုပ်ခြင်း၊ ကိုယ်ဝန် ဆောင် စောင့်ရှောက်မှု ပေးခြင်း၊ ကာကွယ်ဆေး ထိုးခြင်း၊ ဒီလုပ်ငန်း တွေကြောင့် လူထုမှာ အကျိုးရှိတာ သေချာ တယ်နော်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ဦးကောင်း တစ်ယောက် ကောင်း အကျိုးရှိ တာမဟုတ်၊ အားလုံး အပေါ်မှာ ဖြန့်ဝေ ရရှိသော အကျိုး တရားကိုး။ ဒါကြောင့် အားလုံး ရထိုက် တဲ့ပစ္စည်း (Public good) လို့ပြောတာပေါ့။ အားလုံး ရထိုက်လို့ အားလုံး တတ်နိုင် တဲ့ဈေးနှုန်း သတ်မှတ်ပါ ဆိုတော့ ဆင်းရဲ ချမ်းသာ မရွေး လူတန်းစား အားလုံး တတ်နိုင် တဲ့ဈေးနှုန်း ကတော့ အလကား ပေးခြင်း မှတပါး အခြားမရှိလေ။ ဘယ်ဘိဇနက် သမားက တာဝန်ယူရဲမှာလဲ။ ဘယ်တော့ မှ အရင်း ပြန်မပေါ် တဲ့ငွေကြေး ကိုစိုက်ထုတ် ပြီးဒီကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု လုပ်ငန်း တွေကို ပြည်သူ လူထု အကျိုး အတွက် ဆောင်ရွက် ရသူ ကအစိုးရ ပဲပေါ့။
ကုသရေး လုပ်ငန်း ကျတော့ လူနာ မချိ မဆန့် ခံစား နေရတဲ့ ဝေဒနာ ဗြုန်းကနဲ၊ ဒိုင်းကနဲ သက်သာ ပျောက်ကင်းခြင်း ဆိုတဲ့ အကျိုး အမြတ် ကိုလူတစ်ဦး ချင်းစီ အနေတဲ့ ချက်ချင်း လက်ငင်း ရရှိ ခံစား နိုင်တာ ကြောင့် ဒီအတွက် ကျသင့် တဲ့ ငွေကြေး တစ်စုံ တစ်ရာ ကိုလည်း ချက်ချင်း ပေးဖို့ ၀န်မလေး တတ်ကြဘူး၊ အသက် ထက် တန်ဖိုးရှိ တာမရှိ ဆိုသကိုး။ တောင်းသမျှ ငွေကြေး ကိုသိပ်များ တာပဲ၊ နည်းနည်း လျှော့ပါဦး တို့၊ အဆစ် ကလေး ပေးပါဦး တို့ အသက်နဲ့ ရင်းပြီး ဈေးဆစ် လေ့မရှိ စကောင်း၊ ဒါကြောင့် ပုဂ္ဂလိက စီးပွားရေး လုပ်ငန်း ရှင်တွေ အလွန်မျက်စိကျ၊ သွားရည် ယိုစရာ လုပ်ငန်း ကြီးပေါ့။ ဈေးကွက် စီးပွားရေး ကမွေးထုတ် ပေးလိုက်တဲ့ ဆေးကွက် စီးပွားရေး ဟာ ကမ္ဘာ့ စီးပွားရေး မျက်နှာ စာမှာ ကြံတိုင်းအောင်၊ ဆောင်တိုင်းမြောက် အဆင့် အတန်း နဲ့ မျက်နှာပန်း အလွန် လှသပေါ့ ခင်ဗျား။
English စာ လေ့လာလိုသူတိုင်းအတွက် ကျွန်တော်သိတဲ့ ကောင်းတဲ့ Link လေးတွေကို စုစည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒီထက်ကောင်းတာလေးတွေ ရှိရင်လည်း Share လုပ်ပေးပါ။
ဒီမှာတော့ အရမ်းကောင်းတဲ့ Dictionary ကို File size သေးသေးလေးနဲ့ အလကားပေးထားတဲ့ Dictionary ကို ရယူနိုင်ပါတယ်။
Labels: Education, Self learning
ထို့ကြောင့် ဤအရာ ကိုသံသရာ ဟုခေါ်သည် (၄)
ကျန်းမာရေး ၀န်ဆောင်မှု နှင့် ကျန်းမာရေး စံနစ်
ကျန်းမာ ဖို့ ဘာအရေး ကြီးသလဲ ?
ဒီမေးခွန်း ကိုဖြေဖို့ လူမျိုး တစ်ရာ့ တစ်ပါး မှာ အဖြေ တစ်ရာ့ တစ်မျိုး၊ ပါပ လူမျိုး ကိုးဆယ့်ကိုး မှာ အဖြေ ကိုးဆယ့်ကိုးမျိုး ရှိနေမှာ အသေ အချာ ပါပဲ။ ပုဂံ ရာဇ၀င် ကို တုတ်ထမ်း ပြီးငြင်း ရတယ် ဆိုသလို ပဲ ဒီမေးခွန်း ရဲ့  အဖြေ မှာလည်း လူတစ်ကိုယ်၊ အကြိုက် တစ်မျိုး မို့ တုတ်ထမ်း ဖြေကြ ရမှာ မျိုး ဖြစ်တယ်။ အများညီ ဤကို ကျွဲဖတ် လို့ရမဲ့ အဖြေမျိုး တွေက တော့ သင့်တင့် လျှောက်ပတ် တဲ့အာဟာရ ကိုမှီဝဲ၊ ဥတု ရာသီ နဲ့ သဟ ဇာတ ဖြစ်အောင် နေထိုင် ၀တ်ဆင်၊ မက်ဒီကယ် ချက် အပ် ခေါ် လိုအပ် တဲ့ဆေးစစ် မှုတွေ မှန်မှန်လုပ်၊ ရောဂါ ဖြစ်ရင် တတ်ကျွမ်း နားလည်သူ ဆရာဝန် ကြီးများ နဲ့ စောစော စီးစီး ပြသ၍ ကုသမှု ခံယူ ဆိုတာမျိုး တွေဖြေကြ မှာပေါ့။
သူ့ အထွာ နဲ့ သူကျိုးကြောင်း ဆီလျှော် တဲ့ဒီ အဖြေတွေ ကိုမှားတယ် လို့ပစ်ပစ် ခါခါ ငြင်းပါယ် စရာ အကြောင်းမရှိပါ။ သို့သော် ကျန်းမာ ဖို့ အရေး အကြီးဆုံး အကြောင်း တစ်ခုတည်း ပြောပါ ဆိုရင်တော့ အတော် လေးကို အဖြေရ ကျပ်လိမ့်မယ်။
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေး အဖွဲ့ (WHO) ကတော့ ကျန်းမာရေး အတွက် အရေး အကြီး ဆုံး အရာသည် ကောင်းမွန် မှန်ကန် တဲ့ ကျန်းမာရေး စံနစ် (Good Health System) ပါပဲ လို့ ခိုင်ခိုင် မာမာ ဆိုပါတယ်။ ကျန်းမာရေး စံနစ် တစ်ခု ကို အောင်အောင် မြင်မြင် တည်ဆောက် အကောင် အထည် ဖော်နိုင် ခြင်းသည် သာလျှင် အဲဒီ ကျန်းမာရေး စံနစ် လွှမ်းခြုံ ၀န်ဆောင် မှုပေး သော ဒေသ အတွင်း နေထိုင်သူ များရဲ့  ကျန်းမာရေး အတွက် အရေး အကြီးဆုံး၊ အလိုအပ် ဆုံး ကိစ္စ ဖြစ်ပါသတဲ့။
စံနစ် တစ်ခု ကို ဖန်တီး တည်ဆောက် ဖို့ ဆိုတာ ယေဘုယျ အားဖြင့် ပေါ်လစီ မိတ်ကာ တွေရဲ့  အလုပ်၊ လူတိုင်း လမ်းလှမ်း မှီတဲ့ အရာ မဟုတ်၊ ဒါကြောင့် ငါတို့နဲ့ မဆိုင်- လို့တွေးမိ သူတွေ ဒုနဲ့ဒေး။ ရှေးယခင် ကတော့ လက်တစ်ဆုပ် စာ ပေါ်လစီ မိတ်ကာ များလည်း ဒီလို ပဲတွေးခဲ့၊ လုပ်ခဲ့ ကြတယ်။
အားလုံး အတွက် ကျန်းမာရေး၊ အားလုံး ကျန်းမာ သက္ကရာဇ် ၂၀၀၀ မှာ (ခု ၂၀၀၀ ကို ၈ နှစ်တောင် ကျော်ခဲ့ပြီ)၊ လူတိုင်း အတွက် ကျန်းမာရေး ဆိုတဲ့ WHO ရဲ့ မိုးလုံး ဟိန်းတဲ့ ကြုံးဝါး ကြွေးကြော် သံကြီး တွေနဲ့ အတူ ဆင်းရဲ ချမ်းသာ မရွေး၊ နီးနီး ဝေးဝေး၊ တတ်နိုင်နိုင် မတတ်နိုင်နိုင် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ဆုလာဒ် ကြီးကို လူတန်းစေ့ လူမှန်ရင် အခမဲ့ ရရှိ နိုင်စေ ရမယ် ဆိုတဲ့ ပဏာမ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု စံနစ်ကြီး (Primary Health Care) ကို လက်တစ်ဆုပ်စာ ကျန်းမာ ရေး ပေါ်လစီ မိတ်ကာ အီလစ် များက တကယ့် အစောင့် ရှောက်ခံ လူထု ရဲ့  သဘော ဆန္ဒ ကိုတစိုးတစိ မှမမေးပဲ ကိုယ့်ဇာတ် ကိုယ်ထောင်၊ ကိုယ့်ကြိုး ကိုယ်ဆွဲ ပြီး ဖန်တီး အကောင် အထည် ဖော်ခဲ့ ကြဖူးတယ်။ အကျိုး ဆက် ကတော့ ပိုးသာ ကုန်၊ မောင်ပုံ စောင်း မတတ် ဖြစ်ခဲ့ ရတာ ပါပဲ။
ဆိုတော့ ယခင် ကဖန်တီး ခဲ့ကြ တဲ့ ကျန်းမာရေး စံနစ် တွေဟာ အများအားဖြင့် မအောင်မြင် ခဲ့ကြ ဘူး၊ ဒီလို မအောင်မြင် တဲ့ကျန်းမာရေး စံနစ် အတွက် အချိန်၊ ငွေ နဲ့ လုပ်အား တန်ဖိုး တွေရင်းနှီး ရတာ တွက်ခြေ မကိုက်ဖူး၊ အကြောင်းရင်း ကိုပြန်လည် သုံးသပ် ကြတဲ့ အခါ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ပေါ်လစီ တွေဟာ ချမှတ်သူ ထားရှိတဲ့ တန်ဖိုးက များများ၊ အမှန်တကယ် သုံးစွဲ သူတွေ အတွက် တန်ဖိုးက နည်းနည်း ဖြစ်နေတာ တွေ့လာကြ ရတယ်။ ဘယ်လို ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု မျိုး လူထု ကို ပေးသင့် သလဲ၊ ဘာနည်းလမ်း နဲ့ ပေးမလဲ ဆိုတာ ပေးသူ ဖက် ကသာ တန်ဖိုးတွက် ပြီးတစ်ဖက်သတ် ဆုံးဖြတ် ချမှတ် အကောင် အထည် ဖော်လေ့ ရှိခဲ့ ကြတာကိုး။
ဒီလိုနဲ့ ခံရ ပါများ လာတော့ ကျန်းမာရေး စံနစ် တစ်ခု ရဲ့ တန်ဖိုး ဟာ ပေးဆပ်သူ တို့ရဲ့  နှလုံးသား အလို ကိုချည်း လိုက်လို့ မရ ဘူး ဆိုတာ ပေါ်လစီ မိတ်ကာများ သဘောပေါက် စပြုလာ ကြတယ်။ အရေး အကြီး ဆုံး အကျိုးရှင် (Stakeholder) ဖြစ်တဲ့ လူထု ရဲ့ သဘောထား ကိုလည်း တောင်းဖို့ လိုတယ်၊ ဘယ်လို ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု နည်းနာ နိသရ တွေကို ဘာနည်းလမ်း နဲ့ ဘယ်သူ့ ကိုပေးမှာ လဲ၊ ဘယ်ပုံ ဘယ်နည်း လိုချင် သလဲ ဆိုတာကို ရရှိမဲ့ အစောင့်ရှောက်ခံ လူထု အနေနဲ့ ရွေးချယ် တတ်ဖို့ သိပ်လို သပေါ့။
“ဘယ်လို ကျန်းမာ ရေးစောင့်ရှောက် မှုတွေ လိုချင် ပါသလဲ” လို့ တကယ် မေးလာ ခဲ့ရင်- အစောင့်ရှောက် ခံ လူထု ဖက်က “သားသား တိဘူးလေ” လို့ ပြီးစလွယ် ဖြေလို့ မရပါ။ အရပ်ဖက် ဆိုင်ရာ လူ့ အဖွဲ့ အစည်းများ (Civil Society) မှာ သုံးစွဲ သူတို့ ရဲ့ သဘောထား ကိုဆန်းစစ် ညှိနှိုင်း ချမှတ် တဲ့ Demand Based Health Policy ဟာအလွန် ခေတ်စား လာပါပြီ။
ကျန်းမာရေး စံနစ် ကောင်းဖို့ ဘာအရေးကြီး သလဲ?
ကျန်းမာရေး အတွက် အရေးကြီး တာက ကျန်းမာရေး စံနစ်၊ ကျန်းမာရေး စံနစ် ကောင်းဖို့ အရေးကြီး တာက ကျန်းမာရေး လို့ ပါတ်လည်ရိုက် လို့ မရဘူးခင်ဗျ၊ သေချာစဉ်းစားရင် အတော်ရှုပ်တဲ့ အမယ်ဘုတ် ချည်ခင် ကြီးပါ။
WHO ကတော့ ကောင်းမွန် မှန်ကန် တဲ့ ကျန်းမာရေး စံနစ် တစ်ခု ဖြစ်ဖို့ အီးလေးလုံး ကိုဂရုစိုက် ရမယ် လို့ ဆိုပါတယ်။
• ကျန်းမာရေး စံနစ် တစ်ခု ရဲ့ စွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်း (Effectiveness)
• ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု လုပ်ငန်း တွင် လိုအပ်သော resource များကို မှန်မှန်ကန်ကန် ခွဲဝေ သုံးစွဲ တတ်မှု (Efficiency)
• ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ကို သာတူညီမျှ ပေးစွမ်းနိုင်မှု (Equity) နဲ့
• ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု လုပ်ငန်း များရဲ့  ကုန်ကျ စရိတ် (Economy) ဆိုတဲ့ အီးလေးလုံး ပါတဲ့။
ကျန်းမာရေး စံနစ် ဆိုတာကြီး ကလည်း WHO ကစတဲ့ ဇာတ်လမ်းမို့ ကိုယ့်ဇာတ်ကိုယ် နိုင်အောင်က နိုင်ဖို့ အတွက် Health System Performance Indicator ခေါ်တဲ့ ကျန်းမာရေး စံနစ် ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် တိုင်း အညွှန်းကိန်းများကို တီတွင် ဖော်ထုတ် ရပြန် ပါတယ်။
ကျန်းမာရေး စံနစ် တစ်ခု ကောင်းမကောင်း ကို----
• ကျန်းမာရေး အသုံး စရိတ် (Health Care Cost)
• ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ပေးစွမ်းနိုင် ခြင်းနှင့် လက်ခံရ နိုင်ခြေ (Assess to Health Care)
• အစောင့်ရှောက်ခံ လူထု၏ ကျန်းမာရေး အခြေအနေ (Health and Well Being status)
• ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ကိုလူအများ မျှော်လင့် ထားသည့်အတိုင်း အတာ အထိ ပေးစွမ်း နိုင်ခြင်း ရှိ၊ မရှိ (Responsiveness)
• မျှတသော ကျန်းမာရေး ကုန်ကျ စရိတ် (Fair Financial Contribution)
ဆိုတဲ့ အချက် (၇) ချက်ပါ ပေါင်းစပ် အညွှန်းကိန်း (Composite Index) နဲ့ တိုင်းတာ ရမယ် လို့ဆိုတယ်၊ ပြောတဲ့ အတိုင်းလည်း WHO အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံ အားလုံး ရဲ့  ကျန်းမာရေး စံနစ် တွေကို ဒီအညွှန်းကိန်း ပေတံကြီး နဲ့ တိုင်းတယ်။ အကောင်း ဆုံးကနေ အဆိုးဆုံး အထိ ကြီးစဉ်ငယ်လိုက် စဉ်ချ လိုက်တဲ့ အခါမတော့ --- --- --- --- ---
Labels: Health care, Health system, Life cycle
အဆုတ် အမြှေးပါး ရောင် လျှင် ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်းကို ပြင်းထန်စွာ ဖြစ်စေနိုင်၍ အသက်ရှူခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်းနှင့် လှုပ်ရှားခြင်း တို့ကြောင့် ပိုအောင့်နိုင်ပါသည်။
Posted by Nge Naing9comments
Labels: Chest pain, Heart, Lungs